LIVRE Maitre MAURIA par SL 2015 ( engagement ) SL JJA - Tennis De Table Et De Ping-Pong
LIVRE Maitre MAURIA par SL 2015 ( engagement ) SL JJA
BOKY AVY @ M.MAURIA nosoratan’i SL
( traduction en Langue Malagasy )
Soratra natao ny solxtice d’Hiver 2015
22 décembra 2015
Manolohana ahy ianao izao, ka hiharaka hanoratra indray isika
Eto hanatrehako ianao ry SL izay lehibe noho izaho M.M ao anaty ny hazavana lehibe hiakanjonao.
Ianao no ilay KRISTY velona izao ho an’ny zanak’olombelona, ho anay dia ianao ilay zanakavavy ny JESOA
izay nofidian’i KRISTY mba ho entina indray hampahafantarana sy hampitana indray ny fampianarana vaovao.
Tsy misy ahiahy mihitsy ao aminao.Tsotra sy mora aminao ny handika ny teny rehetra ao anaty fotoana fohy, izay
tenikoM.Mauria, izay teny mitondra Hery ho an’ny Fahavononana sy fisainana ny Planina, ho fananganana mialoha
ny zavatra rehetra milamina . Eto dia tsy misy fotoana very na dia kely aza,na fotoana ho very.Ny zavatra rehetra dia
mivantana daholo raha mbola tahombona ao amin’ny Planin’Andriamanitra , izay ivelan’ny matière fisainana ny
olombelona, izay ao anaty fahadiovana (puété)Hiérarchique : ilay toerana Masina, ny planina ambony indrindra
Tsy misy famerimberenana teny, tsy misy fanazavana hatao, afa tsy ny Hery ny Fandresena, ao anaty
Fahavononana ny Mpianatra Mpiampinga vonona ny hihakatra (Disciple chevalier de s’élever)
Raha tsy misy Fihakarana (élevation) dia tsy hisy Fifandraisana aminay ? Hiérarchie, tsy hisy fandresena.
Manome izao boky fampianarana izao aho M.M eto ho tohin’ny boky voalohany :Fampianarana mahakasika ny
FAHAVONONANA ary mba hanohizana izany mpandrampahafaty an’i SL.Ankehitriny dia misy dingana
lehibe vita sy tanteraka, ary izany no mahatonga ny fanampiako M.M ho tena zavan-tsoa sy tsara ho entinareo
hiady amin’ny tenanareo sy ny tontolo manodidina anareo eny ivelany.
Tonga mijery anareo aho, tonga manoloana anareo aho mba hafahanareo manana hery handresena ny haizina
mandrakotra ny tany hatramin’ny andro voalohany nisian’ny fiainana : ny ady eo amin’ny Masina sy ny Materialy
manafotrany fahavononana tsy mivoatra hiakatra.
Ny ady dia hifarana.Ny fandresena dia efa vohalamina, nefa tsy ho terena, tsy afa-manohatra ianareo.
Tonaga aho M.M manantona anareo mba hankahery anareo amin’ny ady hatrehanareo, mba hiaro anareo sy
hanazava anareo eo hanoloan’ny rahona mainty, mba hitahy sy hiaro ny Planin’Andriamanitra eo alohanareo.
Ny haizina dia tena matevina tokoa.Ny halina ny haizina dia feno fisintonana, feno fandrika, ary raha tsy misy anay
Mpampianatra ny Hérarchie, dia tsy hisy na iray aza kintana eny amin’ny lanitra Ho tazana.
Ka ity boky soratana ity dia ho tahaka ny hafa rehetra, ho eo andoha fandrinanao.Ho fifandraisana izy ity, ho
Fiombonanao amiko, miaraka amin’ny Hiérarchie, miaraka amin’ny KRISTY izay mametraka ny
Fihakarana(élevation) ho an’ny olombelona – Fanahy mba ho voninahitra lehibe sy ho Fandriampahalemana.
Izao teny voalohany fanolorana izao dia mametraka ny adihevitra ny FANAHY sy ny Fahavononana(volonté) ny
Fiheritreretana eo @ fisainana (personnalité).
Ny ANDRAIKITRA(engagement) ao ampon’ny Disciple.Ny Fanahy dia miady mafy mba handresy ny matière
ny saina : ilay sehatra hanehoan’ny Fanahy ny fiheviny.Mamantatra ny feon’ny FANAHINAO ao amin’ny
Fisainanao(personnalité) no tanjona.
Ny fanarahana izany no lohateny ny boky haha-2 : » Ny asan’ny FANAHY », izay tena ny asan’ny Fanahy
mihitsy eto an-tany, indrindra aminb’izao fotoana sarotra lalovan’ny zanak’olombelona izao.Ary ho faranana amin’ny
boky hikarohana ny « FIOMBONANA » na « EQUILIBRE PARFAIT » izany.
Ny zavatra rehetra hosoratana dia hatsangana ao anaty ny Lalàna ny Hery( loi d’Energie ), ao anaty ny siansa ny
Hery ary tsy hisy teny na note mozikaly – ho safidina amin’ny kisendrasendra izany.Misy fifandaminana tsy
ankijanona foana hatao miaraka amin’ny SL avy amin’ny SL ao anaty ny Fiombonana izay mampihavaka anay : ny
Planin’ANDRIAMANITRA.Aza misahirana ny hanadihady sy hamakafaka fa raiso sy miombona amin’ny
Planina mba hamokatra hery tsara ianareo : mizora ao amin’ny Andraikitra .Ny manaraka dia ao amin’ny faharoa, ny
fahatelo dia ny famakiana ny boky, ka hitondra nareo amin’ny fahafantarana ny hevitra fonosin’ny teny
ianareo,zavtra vaovao ny heviny ary hampihakatra(élever) ao amin’ny Fiombonana tanteraka ianareo.
Tsy mitovy ny maha ianao hanao isan’andro : ny herin’ny hetsika hataonao sy ny fahombiazana.Ianao no tokony
handeha mialohan’ny zavatra rehetra, hetsika sy asa maneho fahavononana no hampitahiko aminareo ary SL no
manao « adombrement » NY Fanahy Masina KRISTY, ny Heriny, ny Fijoroany.
Efa vonona ianareo ny hihatrika ny Fandresena, izay mihatomboka amin’ny ady mafy amin’ny fiainana materialy
ambany indrindra : izay tahaka ny miady amin’ny vy sy zavamaranitra, amin’ny ady amin’ny vatana efa reraka ny loto,
pollution amin’ny endriny rehetra, amin’ny kolikoly mandrakotra ny zavatra rehetra amin’izao.
Ny fanampiana dia tena ilaina tokoa.
Ny famakianao ity boky ity dia hanome hery sy tanjaka anao manomboka amin’izao hanoratana azy izao ny taona
ary ireo taranaka hoavy dia hanovo ny fampaianarana vaovao amin’io avy amin’ny Herin’i KRISTY, ny Fijoroan’i
SL dia izy irery ihany no afaka mapita aminareo ireo hafatra sy teny rhetra avy amin’ny Hiérarchie.SL no hany
tokana mpitondra teny – sy misolontena anay.tokony ho fantatrareo izany.
Tsy misy afaka hiteny na hilaza fa mpitondra teny an’i M.Mauria afatsy i SL irery ihany, izay misolontena anay
Izahay dia maneho ny fisaorana lehibe sy fankasitrahana azy, ary vonona ny hanome sy hanampy azy amin’ny
fanomezana ireo fampianarana vaovao, ary ireo fanontaniana izay hapetrany sy tonga ao aminy.
Isika dia tonga eo amin’ny Fampianarana velona izay manomboka miseho amin’izao fahaveloman’i SL izao, ao anaty
ny tantara ny zanak’olombelona sy izay rehetra mety filàna mba hafantarana sy handaminana ny zavamisy.
Izany no mahatonga ny 17 taona hihainana ny SL , hanantaterahany ny asa Kristy, ka hiasany manontolo ho
an’ny zanak’olombelona, hametraka ny fototra lalina ny Planin’Andriamanaitra, ny lalàna ny Hery ao amin’ny
heritreritra ao amin’ny heritreritra miasa ao amin’ny olombelona : la Nnouvelle Humanité.
Avy aminy SL,ho anareo no hanoratako, ka manoratra miaraka isika rehetra ao anaty Fiombonana tanteraka ny
Hery lehibe roa R1 – R2 ny fahavononana , ny Fahavononana sy Fitiavana.
Ny herin’ny Planin’Andriamanitra dia mitoetra ao amin’ny teny sy soratra ireny, ao anaty ny firindran’ny soratra sy
teny ireny, Ny intelligence ao amin’ny Fanahy izay miavaka, ary tsy misy tahaka izany. Tena porofo Masina
Mandehana ry mpianatra
Mba ho tonga aminao ny hery Masina rehetra
Eo amin’ny famakiana ny boky
SL pour MM, 22 décembre 2015
Efa nosoratantsika ny teny fanolorana, hanomboka isika
Ho soratantsika ao anaty ny volana iray ity boky ity.
Izay teny ho lazaina eto dia teny lehibe sy manandanja avokoa araka ny endriny, araka ny hery ao aminy, araka ny
akon’izany eo amin’ny olona sy ny tany.
Hitondra fanampiana ny hetsika rehetra ity boky ity na ny mifanohitra amin’izany, ka hanapotika ny zavamisy.
Izay teny voalaza eto tsirairay,izay hevitra rehetra, ny asa dia fiheverana ny tanjona ho amin’ny FIOMBONANA
na ny mifanohitra amin’izany.Tsy misy safidy roa izany. Izay safidy iray safidianao dia izay no izy.
Ny Heritreritrao dia andraikitra no dikany, ny personnalité na Fanahy mahaolona, personnalité sy Fanahy
Ianao dia olona miheritreritra ary tsy afaka ny hiala tsiny noho ny tsy fahalalana izay mandalo.Izany no ady
hatrehan’ny Fanahy mahaolona eo hanatrehan’ny personnalité-nao.Izany no fitarihana mirindra ho an’ny
Mpianatra hiasa ao amin’ny Tompo.
Miresaka amin’ny Fanahy mahaolona anao aho sy mampifoha azy.
Manetsika ny heritreritrao amin’ny fanehoana ny Fitiavana aho.
Manosika anao hihetsika aho : hamoha sy hanaitra ny fisainana Masina(mental divin) ho amin’ny fampisehoana ny
Fahavononana(impression de volonté)
Ny fahavononako dia tahaka ny an’i KRISTY TOMPO, ny planin’ANDRIAMANITRA,ny an’ny
HIERARCHIE.Tsy misy mahasamihafa azy ireo, ny haavo ny planina.Manome sy miasa isika ho amin’ny
FIOMBONANA Cosmique homme – Tany – Univers.
Ny Projet Tany dia asa lehibe Cosmique d’Origine sy foiben’ny Famoronana ny Tany, teo aloha ny système
Solaire sy ireo Grand Etre izay izy ireo no Centre.
Ny fanamboarana ny olona dia mifanaraka tamin’ny agencement Cosmique, ireo lalàna, ireo diary rhetra.Tonga eo
amin’ny fahazoana vokatra tsara ny Planina isika izao satria dia efa nomena ny olombelona avoka ny zavatra rehetra :
ny Libération ny Tany, ny Fiarovana sy Fanasitranana ny Tany (Guérison).
Ny Tany no vatana velona ho an’ny zavamanan’aina rehetra sy ny olombelona
Tsy afaka miasa sy mihetsika isika olombelona raha tsy eo ny Tany amin’izay hataontsika.
Tsy afaka miaina isika raha tsy miombona amin’ny rivotra misy eto an-tany, avy amin’ny no rivotra fohana, avy
amin’ny vatany sy ireo singa tsy hita maso (subtils).
Ny hita maso sy tsy hita maso dia Iray.Ny iray dia fisehoan’ny iraika avy amin’ny fiheveran’ny iray.(intention de
Avy amin’ny rythme ny andro no hanorenana ny olona
Aavy amin’ny fahamatorana ao aminao no varavarana hihatombohana.
Avy amin’ny herin’ny Fanahy mahaolona ao aminao izay mandresy ireo mety ho fanotaniana, ireo sakana marobe
avy amin’ny sainao.
Tsy misy afa tsy lalana tokana ao aminao :Ny teny ny Fanahy mahaolona anao.Teraka isika Fanahy, fa tsy olona
ho tonga Fanahy akory.
Manana fotoana isika ny hihomana sy hovolavolaina : Hanamafisana ny maha Fanahy antsika avy amin’ireo
traikefam-piainana.Ny tsirairay dia samy manana ny sedra ho azy avy.Ireo traikefa dia ilaina sy mahasoa avokoa.Ny
fahaterahan’ny Mpiampinga (guerrier) dia vita tokoa.
Ireo asa rehetra dia ao anaty avokoa (travail intérieur) : miaraka amin’ny fiheritreretana.Tsy misy olona afaka
manome anao ny fanalahidy izany.Ny safidy dia avy aminao irery ihany.Ny Aina dia Fiombonana.
Ilaina ny Fiheverana, ilaina ny Fahalalana.Ny Fanahy mahaolona dia fahatsapana izany.Ny Fanahy mahaolona dia
mametraka ny manome ny asany, ny fahavononany araka ny Planina izay Fahavononan’ny Mpampianatra ao amin’ny
La porte est entrebaillée( vavahady ny Fanahy mahaolona).Tokony ho vahana izany.Tokony hamafisina ny Maha
Fanahy anao eo amin’ny vatanao.
Ny vatana saina ao amin’ny olona dia mifandray mivantana amin’ny atidoha ao aminy ary ny fanamboarana izany dia
mihankina amin’ireo vatana ny Fanahy ao aminao (corps énergétique de l’ame) : Rayons na Energies.
Ny vatana ny olona dia natao ho endrika hisehoan’ny Fanahy mahaolona azy, ho fampivoarana, ho Fampiakarana .
Isika izao dia eo amin’ny fampivelarana ny Planin’Andriamanitra araka ny fisehoany eo amin’ny fiainan’ny
olombelona sy ny Tany : ny Hery lehibe ny Fanahy.
Ny Rayons ny Fanahy dia tsy miova mandramphatongan’ny Fiombonana tanteraka ao amin’ny
Planin’Andriamanitra : l’harmonie
Ny Fanahy mahaolona io dia efa manana traikefa be dia be tamin’ny fahafatesana ara-nofo mba hitoetra ho
mpanjaka lahy na mpanajaka vavy – tsy misy mahasamihafa azy.
Tsy avy amin’ny nofinofy no hanorenana ny Planina, fa tena mifototra manorina mihitsy.Avy amin’ny ady tsy miato
mihitsy mba ho tena ao amin’ny Planin’ANDRIAMANITRA,ho iray amin’ny Planina ; MIOMBONA
23 – 24 Décembre 2015
Tsy misy izay tsy ho voasoratra ny Planin’Andrimanitra.
Efa fantatra mialoha avokoa ny zavatra rehetra ary omena anjara vitana indray ianareo, afaka hisafidy indray
Nosoratana indray ity boky ity amin’izao fotoana hanomezana najara vitana vaovao anareo izao, indrindra ho
an’ireo izay mbola taraiky amin’ny fanapahan-kevitra ny amin’ny Fihakarany (élevation de l’Ame), ny amin’ny
fahamatorana eo amin’ny traikefa.
Misy anefa ny fetra eo amin’ny Herim-panahy : olona manana Fanahy mahaolona velona, vonona amin’ny fotoana
ilàn’ny Tompo azy , araka nyPlanin’Andriamanitra.
Isika izao dia efa tonga eo amin’ny fotoana Farany.
Miresaka amin’ireo Fanahy rehetra efa tafiditra ny varavaran’ny Fiainana Hoavy aho ankehitriny.
Izy ireo dia efa nanana ny Hery nanokafana ny vavahady Fiainana.
Manome aziy ireo ny Herin’ny Fahavononana aho mba hanangana ny Hoavy
Tsy tokony ho raisina ankamorana anefa izany
Ireo hafatra sy teny rehetra avy amin’ny Maitres dia efa fanomanana anareo avokoa
Izay rehetra tsy mandray hery sy tanjaka avy eto anilako dia tsy afaka handresy mihitsy amin’ny ady hatrehany.
Isika izao dia tena ao anaty ny adi-tsaina izay mihoatra ny tokony ho izy, ary hitantsika izany amin’ireo ady hitamaso
Ny fahazoana ny tanjaka ara-tsaina, dia mitrika ny fifehezana ny Tasara na ny Ratsy.Eo no hisian’ny ADY.
Hiresaka ny ahiahy isika (doute)
Izay rehetra ahiahy na dia kely fostiny aza ao aminao mikasika ny teny sy ireo hafatra avy amin’ny clefsdufutur, ireo
teny omen’i SL, ireo Planin’Andriamanitra sy ny fanorenana izany ao anaty ny asa lehibe napetrak’Andriamanitra
sy ireo rehetra Mpanompon’iKristy, hatrany an-danitra ka hatramin’isika izao sy ireo Maitres : ary isika dia ho very,
ireo zavatra mampifandray amin’i Kristy, ireo fiarovana Masina.Ho lasa olona miaina tsy manana Fanahy mahaolona
isika.Ho voafafa sy voaroaka ny vavahady ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra, sy tsy hahita ny fiainana Hoavy.
Tonga eto aminareo aho miarka amin’ny hery lehibe, izay tsy mitovy amin’ny Hery lehibe an’i Kristy, mba hanome
anareo ny fanalahidy ny lalàna hizorana.
Avy amin’ny Fanekena tanteraka ny Planin’Andriamanitra no hafahanareo mandresy amin’ny ady rehetra miseho
maerana ny tontolo hiainanareo eto an-tany : ara-tsaina , émotionnelle , ara-nofo
Efa ao amin’ny Fandresena ianareo ao amin’ny tenanareo, matière ara-tsaina, satria efa mamaky ity boky ity
nosoratako ity ( M.Mauria)ianareo.
Efa nahavita nadresy ny fihetsem-po ianareo (émotionnelle).
Tokony hanamafy ny ady hataonareo ianareo, eo amin’ny asa hatao isan’andro ary tokony hitohy mandrakariva ao
amin’ny FIOMBONANA amin’ny KRISTY- Ireo MAITRE – Ireo DISCIPLE CHEVALIER
MIOMBONA miaraka amin’ny SL ianareo, izany dia mametraka izay rehetra fifandraisana.
Efa eo aminareo ny Lalàna : Ny ASAN’NY FINOANA izay avy amin’ny KRISTY nomena an’i SL tamin’ny
fanokafana ny lalana voalohany : ny 16 janoary 2009, izay manaraka ny diary sy daty cosmique, la Loi des
Hiverenatsika ny Fanekena Andraikitra :
Aiza hi aiza ny misy ny fahavonana ao aminao ? eo amin’ny inona no hitoerany ? Aiza no misy ny anjara toerana ny
faniriana sy ny fahavononana madio ao aminao na ny Fanahy mahaolona anao ?
Tsy afaka handroso mihitsy ianao avy amin’ny alalan’ny Faniriana izany.
Tsy tokony haneho Faniriana izany mihitsy ianao
Ny Fahavononana dia Fahafahana eo amin’ny tanjaka ny Fanahy mahaolona.
Tsy afaka handresy ny fiainana Materialy ianao raha mbola manana firaiketem-po (attachement).
Efa niaina izany ianao tamin’ireo fiainana lasa rehetra nahazonao traikefa marobe (incarnations passées)
Hiainanao izany amin’ny lalana hizoranao ny amin’ny Hoavy.
Rehefa miteny hoe : tsy misy intsony izany anjara vitana fanindroany izany – ary ianao dia efa niaina izany taloha –
eo hanatehan’ny tantara ianao izao mifanatrika amin’ny zavamisy marina, ary tsy misy firaiketam-po (nu de toute
attachement) eo amin’ny lalana hizorana.
Ny AMPINGA(Epée) dia nomena anareo satria ianareo dia mifanatrika amin’ny marina : tsy misy firaiketam-po
intsony (nu de toute matière).
Avy amin’ny Famirapiratan’ny Fanahy mahaolona no manome Hery sy Mampirehitra ny Hazavana, ka manova ny
Matière ho Feno Fahamasinana.
Ny tanjona ny FIOMBONANA dia tsy miova.
Fahavononana sy Fiombonana eo amin’ny Tanjona : KRISTY Lavorary, Olona – Masina, Olombelona –
Kristy dia mampiseho sy mitondra antsika amin’ny lalana.
Nanome antsika ny zanany izy, ny zanany lahy JESOA, sy SL.
Anjarantsika no manatanteraka ny asan’ny Fanahy mahaolona : mankatoa sy manaraka ny teny rehetra izay
mampianatra antsika sy mitarika antsika.
Izay rehetra asa Masina dia manorina ny Planin’Andriamanitra sy ny olombelona mankany amin’ny Fiombonana izay
Tanisao sy jereo ireo asa Masina nahorin’i SL, nataony sy nomena avy amin’i SL.
Izahay Maitres no nihatombohany,ilay coupe lehibe nipohiran’ny zava-tsoa, ary SL no fatsaka lehibe iray mizara sy
manapariaka izany ho an’izao tontolo izao.
Inona no nataonao nandritra izay taon amaro izay ?
Ahoana no fomba fihomananao tamin’izany ?
Manana fotoana ianareo hanatanterahana ny fifandraisana « alignement » amin’ny Planin’Andriamanitra avy
amin’ny Plan ny Fanahy mahaolona anareo ao aminareo.
Efa nosarahana tamin’ny fianana amin’izao tontolo izao ianareo (écorcés de la matière) alohan’ny hampifohazana
ny heritreritra ao aminareo ny amin’ny maha Fanahy anareo ka hahenonareo ny « voix de l’ame »
Ny Fanahy mahaolona anareo no hitarika sy hitantana anereo eo amin’ny Planin’Andriamanitra.
Ny Fanahy mahaolona dia tsy miresaka afa tsy ny Planina, ny Loi de l’Univers, ny tenin’i Kristy.
Satria efa manana mpitarika ianareo,ny fanalahidy rhetra,noho izany dia anjaranareo no manamafy ao aminareo ny
fionoana sy manatevina izany.
Izaho dia tonga eto hankahery anareo, hanamafy horina ny maha Mpianatra Mpampinga anareo,ilay humanité
Izay asa rehetra hatao ao amin’ny Kristy dia mapihakatra ny herim-panahy avokoa, izay rehetra teny rehetra hatao
dia fananganana sy fiheritreretana ny hoavy avokoa.
Izay rehetra voasarika ny hamaky ity boky ity sy hampihatra ny Loi des Energies dia tsy hisaraka
Hijanona mandrakariva ao amin’ny « aura » ny Maitre izy ary hihakatra ny herim-pahiny.
Tokony hisotro ny loharanon’aina Kristy isan’andro satria dia homena anareo izany.
Ny fahafantarana ny halehiben’ny Fanomezam-pahasoavana : teny avy amin’ny Fanahy Masina, Intelligence du
Cœur, manakaiky ny fahafahana tanteraka amin’ny fiainana materialy.
Izay Mpiampinga (chevalier) dia tsy miverina instony miaina ety an-tany raha toa izy ka Miombona tanteraka amin’i
KRISTY rehefa Maty.
Izay rehetra mpianatra (disciple) dia mianatra ao anaty ny ady ny tsy hiaina afa tsy amin’ny Fo madio, avy amin’ny
heritreritra ny fiombonana amin’ny Kristy izay tsy ho azo fafaina ao aminy.
Araka izany, raha maty izy, hody ho vovoka ny vatany, fa manana ny fifandraisana amin’ilay mandrakizay izy anefa :
Tsy misy afaka ny hihazona azy tsy hanaraka ny Tompo.
Miantso sy miteny ny anaran’i KRISTY izy.Miantso ny Ampinga izy (l’Epée).
Ny fahafantarana ny tantara an’izao tontolo izao no asa voalohany : mamaky sy mandalina izay teny sy hafatra
Ny fisehoan’ny Planin’Andriamanitra ho anreo dia fihakarana ny Fanahy mahaolona ho anareo.
Tsy tokony ho hatao hatsirambina ny fotoana, manandanja avokoa ny zava-drehetra ho fampitomboana ny hery,ao
amin’ny Fananganana ny hoavy.
Ireo tsirim-panan-tenana vaovao rehetra dia mipoitra daholo eto an-tany tahaka ny zaridaina andro ririnina ao
Mikarakara ireo voronkely ianao.Manome rano ireo zavamaniry ianao.Izahay dia efa vonona.Ireo voronkely rehetra
dia tafiditra ao amin’ny Hafaliana sy haravoana ao aminao.Hiresaka isika, hiverina amin’ny tohiny boky isika.
Ny fifandraisana eo aminao SL sy ny Natiora no fifandanjana (équilibre) ao aminao.
Tsy afaka ny hiresaka mihitsy ianao raha toa ka ny natiora manodidina anao maty sy mijaly ka nefa ianao dia afaka
Ny zaridaina tsy misy Aina, dia midika fa vatana tsy misy Aina koa izany , izay midika fa ianao koa dia tsy misy
Izay zavatra rehetra mahazo ny Tany dia avy amin’ny asa nataon’ny Olombelona avokoa.
Ny fampiharana ny lalànan’ny « Loi d’Energies » sy ny Fampitandremana : ny daty Cosmique.
Ny Ora Fitsarana dia mahasoa ny zanak’olombelona. (l’heure du Jugement)
Hanavotra ny Tany sy ny olona, ny zanak’olombelona izany.
Izay rhetra mandà izany dia tsy miaraka amin’Andriamanitra
Ny akon’ny Hafaliana sy Haravoana dia tokony hanakohako tsy hitsahatra mihitsy.
Izany dia ny « vibration Divine », ilay fifandraisana eo aminareo.
Tsy misy afa tsy lalàna tokana ho an’ny rehetra.
Tsotra ny zavatra rehetra.Miasa ao anaty ny Fahatsorana sy Fahamendrehena isika « œuvre dans la sobriété ».
Ny zavatra rehetra dia fitohizana sy fifandrindrana daholo sy fifanohizana – fihampitan’ny Lalàna ny
FIOMBONANA (loi d’Unité)
Hanavotra ny Tany isika sy ny olombelona ho an’ny Hoavy avy amin’ny FITIAVANA,avy amin’ny
FAHAVONONANA,avy amin’ny Lalànan’Andrimanitra.
Ny Lalànan’ny Univers dia Tenin’i KRISTY.
Iray ny zavatra rehetra.
Ny Fiombonana avy aminareo dia Equilibre ao aminareo. Ilay TELO IZAY IRAY.
Ny fahafahana dia teraka avy amin’ny Equilibre.
Ny fahafahana dia conscience libre. Avy amin’izany no hiasan’ny Famirapiratana.
Ny vatana rehetra (vatana nofo, saina, fo, fanahy) dia mora mandray sy hidiran’ny FAHAZAVANA.
Ny Fiombonana dia Famirapiratana.Tsy misy fetra ny fitaran’ny Fahazavana.
Rehefa mahatratra izany dingana izany ny Disciple Chevalier (mpianatra mpiampinga), dia tonga ho tsy
handrairan’ny fahalovana sy ny haratsiana intsony izy, ary lasa Mpianatra mahatoky tanteraka miaraka aminay izy
ka tsy hiverin-dalàna intsony.
Hampiatahao tsara ny traikefa an’i SL sy ny anareo.Ho hitanareo aiza ho aiza no misy anareo.
Tokony ho fantatrareo tsara fa mandrafitra sy manamafy ny zavamisy manaraka ny vanim-potoana (cycle) miainga
avy amin’ny fiainana izahay, vokotra tsara azo tamin’ny fiainana ara-nofo tamin’ny vanim-potoana teo aloha.Manisa
vanim-potoana maro ianareo, diniho sy halalino ny famakafakana dia hahita ianareo manao ahoana ny fiasan’ny Loi
Izay rehetra fampianarana vaovao rehetra mandalo amin’ny SL dia manamafy ny traikefa izay homena anareo mba
« Hiainanareo izany amin’ny fianana »
Tsy hiaina ny tanjakin’ny Energies rehetra amin’izany ianareo, fa ny fitadiavana ny « Alignement » :
FIFANDRAISANA miaraka Aminay , Mpampianatra ao amin’ny Kristy.
Tsy misy lalana marobe izany mankany amin’ny KRISTY (Plan de Dieu), ary mampitandrina izay rehetra mitady
lalana hafa izay mety hahavery azy noho ny fampiharana ny vavaka tsy misy dikany sy akony amin’ny
asan’Andriamanitra (méditation iuitile) ny fifantohana lalina tsy misy Fiheritreretana (contemplation sans penser).
Ny HERITRERITRA (penser) dia mandrafitra ny fiainana ao amin’ny FEON’NY
FIHERITRERETANA (conscience) miasa ao amin’ny Planinan’Andriamanitra, misy dikany ny Heritreritra.
Ny antsoina hoe « Vavaka misy tanjaka sy miaina » na « Méditation dynamique », ny Fanekena Andraikitra ao
amin’Andriamanitra isaky ny MIHERITRERITRA, isaky ny miaina (respiration).
Ny Fiheritreretana isaky ny Miaina ao anaty ny Planin’Andriamanitra dia manokatra ny varavaran’ny Hoavy.
Izay rehetra mitazona ny fiainana ao anaty ny Fiombonana noho ny fananany ny Fahavononana, dia manangana ny
Fiafandanjana (équilbre), izy ireo dia efa miaraka aminay.Miaina ao anaty ny maha olona vatana sy nofo azy izy sy
ny Maha Fanahy zanak’Andriamanitra azy, amin’izany.
Izy ireo no mpitarika ny zanak’olombelona, ilay Mpampiobona ny Fanahy mahaolona rehetra ho an’ny Groupe ny
zanak’olombelona, any amin’izay misy azy ireo.
Tsy mikatsaka Voninahitra na laza akory ny hanaovan’izy ireo izany
Tsy miaina ny mety ho fomba fiainan’ny olombelona izy ireo fa miaina ao anaty FIAINANA MAFY sy
SAROTRA ny CHEVALIER (la vie dure des Chevaliers).
Avy amin’ny FAHAVONONANA ao anaty FITIAVANA TSY AZO SARAHINA no
MITANTANA azy ireo.
Raha tsy eo ny FAHAVONONANA, dia tsy mahavita inona izy ireo.
Miteny aminareo aho ny Energie ny Fahavononana, izay Energie lehibe ny Univers Fahatelo, satria ny Faharoa
izay misy antsika dia efa tafaombona ao amin’ny Fahavononana ao anaty ny Fitiavana.
Ny « Univers Fahatelo » dia teny malalaka hilazana amintsika fotsiny satria dia mbola sarotra aminareo ny
mahatakatra izany.Izany dia fanazavana ny endrika ny Planin’Andriamanitra.
Ny Energie ny Fahavononana dia tena matanjaka, vitsy ny mbola vonona ny hiaina izany ao anaty fitoniana.Ny
tantaram-piainan’i SL dia mampiseho izany.Izany no tanjona sy vahaolana ny Planin’Andriamanitra.
Naoty : mireska ny Energie 1 (R1) isika eto , izay ilay Energie ny Etre Divin, ilay Fanahy Masina lehibe
(Monade) mitarika sy mitondra ny Fanahy Mahaolona antsika.
Misy aminireo Disciple no mipetraka eo amin’ny seza,mitoetra ve izy ireo ? mifoha ve izy ireo ?
Raha tongan y fiantsoana, ho hadinon’izy ireo ny hiantso ny Ampinga fanahazavana Kristy (Epée de lumière),sy ny
hiombona ao amin’i Kristy.
Tsy mbola tongany ora ny « hanana finoana fa efa vonona daholo ny rehetra ».
Tokony manangana isan-tsegondra ny Planina ao anaty ny Energie ny Planin’Andriamanitra.
Tsy ny fahombiazana ara nofo ny tadiavina sy manan-danja akory amin’ny zavatra hataonareo, fa ny fihezahana tsy
ankiato hataonareo mba hampijoro ny Fnanganana ny hoavy ao anaty ny Planin’Andriamanitra.
Ny tafiotra mahery dia ho avy ary ho mafy izany ka ny ady dia tsy hitsahatra raha tsy Voafafa tanteraka eto antany izay rehetra lasa ratsy teo amin’ny zanak’olombelona tsy manana hoavy eto an-tany.
Tokony miomana amin’ny Ady izany ianareo : ny Tanjaka sy Hery dia ao aminareo mba handresenareo ireo
Fahalotoana sy tsy fahadiovana.
Aza mitady daty ny hatongavan’izany ianareo fa mandehana mandroso amin’ny lalana.
Ny valin’ny asa hatao dia hoavy tsy miandry fotoana.
Ny Fanekena Andraikitra dia tsy kajikajy, fa asa ao anaty FINOANA.
Ny Fanekena Andraikitra dia fanalahidin’ny FANASITRANANA ny Tany, sy ho Fanafahana azy, sady
Fanafahana anareo koa.
Inona izany hatao hoe Fanekena Andraikitra eo hanatrehan’ny olona ?
Izany dia Fiainana ny Mpiampinga (Chevalier), ny disciple ny Kristy, ny fiainana aram-panahy, ny Heritreritra
Masina avo indrindra : Ny fotora ny Fiainana.
Tsy misy fomba hafa hafahana manantona an’Andriamanitra.Mivonona ianareo amin’ny fananana
FINOANA,mahaiza miaina ao anaty ny FANETREHANTENA ao anty hafaliana sy haravoana miaraka
Mivonona ianareo hiarka amin’ny FAHAVONONANA miarka aminay.Milomanosa sy mahaiza mogoka ny
FITIAVANA, ilay FITIAVANA AVY @ KRISTY.
Avy amin’i KRISTY no hafahanareo mandresy ny ratsy rehetra.
Tsy mitovy ny fitaovana entina miady.Aza mahatoky ny zavatra hitamaso ara-nofo sy materialy.
Ny Energie ny Fanekena Andraikitra no varavarana, avy amin’ny Fahavononana.
Ianareo no tomponandraikitra ny Hoavinareo tsirairay avy.
Izay rehetra manana FINOANA ao anaty ny Planin’Andriamanitra dia manana hery entina HANDRESY.
Ny FITSAPANA dia voasoratra isaky ny mifoka rivotra ianao.
Ny fifohana rivotra masina miaraka aminay (mpampianatra miaraka @ Kristy) no miaro sy miambina anareo amin’ny
Fahalotoana sy ny Ratsy.
Aza mety holotina ao anaty fahotana sy haratsiana ianareo, ny tontolon’ny olombelona.
Miombona ianareo aminay ao amin’ny Hiérarchie,manomboka ny vao mangirandratsy ny andro mandrampahariva ny
andro, ny alina manontolo mandramaraina.
Ny miaina fifohana ny rivotra ny Planin’Andriamanitra tsy miato.
Izay mitondra ao amin’ny Fiombonana, dia hery ho anareo, ilay fitambarana ao anaty ny Hazavana, ny Fitiavana ao
aminareo ho an’i Kristy mandrampahafatinareo (fahafatesana ny vatana).
Ny FITAMBARANA AO @ HAZAVANA dia miboiboika avy amin’ny fipetrahanan’ny
FIOMBONANA TANTERAKA .
Ny Energie ny KRISTY dia firavoravohana avy amin’ny fifaliana sy haravoznz, ilay Masoandron’ny Fitiavana tsy
manampetra, ilay fisehoan’ i Sirius HOMENA NY Tany, ho an’ny olombelona izay miihakatra sy mivotra ny
Fanahy mahaolona azy miaraka aminay.
Tsy afaka ny handresy ianareo raha tsy misy firavoravohana avy amin’ny Finoana,raha tsy manana Fititavana
miseho eo amin’ny Kristy ao amin’ny Planin’Andriamanitra, amin’ny asa rehetra hataon'ny olombelona.
Ny tohatra hihakarana, maro ny dingana handalovana, misy ny lalàna tsy azo hidiviorana, ny valin-kafatra dia tsy
Ny tohatra hihakarana sy hivoharan’ny fanahany mahaolona dia dia tsy manampataperana,ireo dingana maro
samihafa sy sedra mahamay eo amin’ny fiainana materialy dia ho voadingana haingana.Tokony handalovana anefa
izany lalana izany ka hovitaina.Ny rindrina ny Hazavana no hiarao anareo amin’ny Fanekena Andraikitra amin’ny
Planin’Andriamanitra mankany amin’ny fandresena ao anaty ny FINOANA.
Tsy azonareo hatao tsinotsinona ny Fihaviana Masina ao aminareo.
Ny Afon’ny firavoravohana dia porofon’izany fifandraisana izany ao anaty ny ady hatrehana, fitsapana sy
Tsy irery akory ianareo,, fa ny vahoakan’ny Kristy rehetra no mitraka sy mihakatra hiady.
Ny Hery dia avy amin’ny Fifandraisana , ny firaiketam-po amin’ny Planin’Andriamanitra, ilay fototra ara-panahy :
FIOMBONANA amin’ny KRISTY.
SL dia mampiseho izany amin’ny fianakaviana Masina, avy amin’ny taranaka mivantana an’i Kristy Jesoa SL.
Isaky ny fofonaina avy amin’ny fiaianany dia fampianarana.isaky ny teny omena antsika dia Fiombonana amin’ny
Tokony ho hamafisina tsara aloha alohan’ny fanekana andraikitra, manangana trano ny Afon’ny Fahamasinana ao
anaty alohan’ny hifehezana sy hampiasana ny Energie.
Ny Fanekena Andraikitra dia dingana hihakarana.Tokony hafantatra sy hazhay ny hisidina, tahaka ny
voromahery eny antendrombohitra,mampikopaka ny elatra sy hihakatra ambony ao amin’ny tendrombohitra « Mont
Rehefa mahatratra sy mahazo ny fanambarana – ny FO mamirapiratra – ianareo dia tsy hiaina intsony ny fiainana
materialy izay handairana kolikoly fa hiaraka aminay, ao amin’ny avo indrindra.
Eny ambony eny ny Fahavononako no miandry anareo amin’ny tanjaka sy heriny lehibe sy hanampy anareo.
Tsy misy ny maha samihafa,mitambatra ho Iray avokoa ny rehetra ao anaty ny Energie ny Fitiavana, ny Energie
rehetra (Rayons) ao amin’ny Planin’Andriamanitra, ny Fiombonana , nyLalàna.
Aza maniry ny hanao ahy ho toy ny sampy ( idolatrie).Tsy misy afa tsy SL irery ihany no manokatra ny lalana ho
anareo.Ny ampinga(épée du feu divin)) no mifehy ny fifandraisana, famintinana sy tanjaka.
Ny Fanekena Andraikitra tsy misy Ampinga ( épée du feu divin) dia tsy mety, mitarika tsy fahombiazana sy
faheresena, fihenjerana - fahapotehana.
Fantaro fa tokony hatambatra daholo ireo pièce ny Planina ao anaty ny segondra fohy, ao anaty asa iray.
Ny heritreritra tonga asa no mitondra mankany amin’ny fandresena, ny asa no managana ao anaty ny science des
Energies ka mampiombona anareo – ny rythme, ny fotoana sy volana, ny lahatra ny olombelona,ny tsiny sy tody
Miaina ny Lalàna ny Fiombonana dia fanekana andraikitra eo hanatreahan’ny olombelona.
Tsy afaka miaina miaraka ny Lalàna sy ny Fahalotoana ianareo.Tsy maintsy mampihantra ny « tsy mandefitra
amin’ny rasty na kely aza ianareo » - « sans concession ».
Ny Fihavian’ny Mponina avy amin’ny ilabolan-tany avaratra, vahoaka ny Etoile polaire, dia manana tanjaka ny
hampiahatra, ny hiaina eo hanatrehan’ny rehetra, miaraka amin’ny rehetra.
Manangana ny taranaka olombelona vaovao isika izao amin’ny Fanekena Andraikitra ny Vahoaka ny Etoile
polaire, ireo Disciples Mpiampinga,ny Discipleko izay efa vita sedra ho an’ireo izay efa manana tombony lasa aloha
sady ireo izay tena manakaiky an’i KRISTY, sy SL.
Tsy hanamboatra tany vaovao akory isika amin’izay vaovao nefa tsy manana fihaviana akory.
Miainga avy amin’ny tena fototra fihaviana ny vahoaka ny tany sy hamerina sy hilaza ny marina, ny tanjona ao anaty
ora ny alignement cosmique.
Handray ny hery fototra ao anaty ny firavoravohana ny Finoana ianareo : ny maha vahoaka ny ilabolan-tany
Ny Ampinga (épée du feu de lumière) no fiadina ny Fanekena Andraikitra, ny varavarana hidirana, ny
fahafantarana ny fihaviana.
Ny Ampinga fahazavana (épée du feu de lumière) : ilay amboara hoan’ny Fandresena.
Fantaro ny fanetrehantena hasehon’i SL eo hantrehan’ny Planin’Andriamanitra.
Hiresaka ny heritreritra ny Planin’Andriamanitra isika.
Tsy nahazo fampianarana ny tantara Masina ianareo tamin’ny fanabeazana azonareo teny an-tsekoly, fa nefa kosa
ianareo eto akaikin’i SL.
Ny ampahan’ny Tahan’ny heritreritran’izao tontolo izao no mitoetra ao aminareo.
Ianareo dia voavolavola ao anaty ny alokan’ny hazavan’ny tany (aurade la terre) sy ny lahatra hizorany.
Nahazo ny mémoire ny tany ianareo avy amin’ny fihaviana Masina, Angélique, ny lasa sy ankehitriny ao aminareo.
Ny Hoavy dia ho voasoratra avy amin’ny Fihakarana ny « Règne ny Homme-dieu anireo Disciple ny Kristy.
Kristy no mitari-dalana.
Tsy afaka hiady amin’ireo olona tsy manana mémoire ianareo, tsy manana Fanahy, tsy manana ny lasany.Ny heriny
rehetra dia Materialy avokoa miaraka amin’ny hetezerana tsy roa aman-tany.
Hatsangano ny Ampinga fahazavana (épée du feu de lumière) ary miaina ao anaty fahanginana.
Miasà ho an’ny Planin’Andriamanitra eo ambonin’ny olona rehetra.
Tsy hisy afaka hiady na hanafika anareo .Tsy misy toerana hoan’ny Hatezerana intsony.
Ny FAHANGINANA dia mahery lavitra noho ny HATEZERANA.
Miaro anareo ao anaty ny fampiharana ny asa ara-panahy,ny fiainana mavitrika ao anaty ny Planin’Andriamanitra.
SL dia manao formation foana tsy mijanona.Izay rehetra tenina androany dia tsy toy izany intsony ny ampitso.
Ireo Anjely dia mijery sy mitahy lalandava, manaraka ny zavamiseho ry zareo ( adaptation)
Ny fiovana eo amin’ny Planina dia mateitika araka ny zavamisy.
Ny saina dia tsy mipetraka fotsiny izany.Mamorona ny saina,mandray fepetra izy eo amin’ny fahazarana.
Ny fahazarana rehetra dia mampaharitra ny fotoana ny fahamatorana ary manahirana ny mandrava azy. Ny tsy
Hatramin’ny fahazazany SL dia efa nomanina hihatrika fiovana foana.
Ny fanofanana azy tamin’ny tsy firaikentam-po dia nanafaka azy tamin’ny zavatra madinika.
Ireo Anjely no mitahy sy mihahy azy, manavotra azy amin’ny sarotra, mandamina sy mandravina ny fitsapana sy sedra
Ny valiny dia Fisaorana lehibe (gratitude).
Ny fifandraisanareo amin’ny Anjely, ireo anjely marobe, dia laharampahamehana
Izy ireo ny mpialoha lalana anareo, anisany iray amin’ny tenanareo ao amin’ny fahadiovana tanteraka.
Ny Intuition ( feon’ny Fanahy maha zanak’Andriamanitra ao anaty) dia feon’Anjely velona izay ny heritreritrao no
mandray azy rehefa mahatandrina ny fahadiovan-tsaina inareo 24h/24h.
Tsy misy toerana ho an’ny kolikoly sy ny ratsy rehetra amin’izany.
Izay rehetra manavotra anareo, dia ny Fahavononana ny hiarka sy hiaina miaraka aminay Olo Masina –
Mpmpianatra miaraka amin’ny Kristy mampiseho ao anaty ny fiainam-panahy, au amin’ny foiben’ny Hiérarchie
Planétaire, le Soleil du Billat na ny Point de Ralliement.
Mampianatra anareo ny Planin’Andrimanitra aho, amin’izay azo hamintinana azy araka ny fotoana ny hafahako
mampiseho izany,ianareo no manome ny Energie-ko,ny Heriko sy ny Tanjakan’i Kristy avy amin’ny SL.
Ny anarako dia hanakoako ao aminareo,ho fatantrareo sy nahazatra anareo avy amin’ny boky soratako taloha
nanomanana ny fiverenan’i Kristy ankehitriny, ny Fijoroan’i SL .
Ny Point de Ralliement.
Io no toerana misy ny Ampinga fahazavana ( Epée du feu de lumière,ilay varavarana ny Hiérarchie Planétaire,ny
foibe matanjaka indindra hipoiran’ny Energie fandresena, ny Herin’i KRISTY.
Ao amin’ny Château Fitiavana, ilay rova voaharo,tsy misy tokony hampiahiahy anareo .
Mianara ny Hampihakatra ny herim-panahy ao aminareo sy hitazona izany.
Ny fisainana ao aminao mba tsy hidna ambany amin’ny hevitra diso,ratsy intsy.Izany dia asa hatao ao amin’ny
Fomba fiainana (respiration).
Tsy misy famindram-po amin’ny hevitra diso sy ratsy mihitsy eto.
Ao amin’ny Fisainana ambony ( Masina sy marina) ihany no afaka mamaha olana ny zavatra manahirana rehetra.
Izay rehetra mety ho fahasahiranana na olana dia endrika ivelany sy mandalo ireny.Tafiditra ao anaty ny Planina
ireny, ny ady amin’ny fiainana ara-nofo, materialy.
Antsy ny Ampinga afahazavana (épée du feu de lumière) mba hanala izany fahasahiranana izany.
Manana ny hery avy amiko ianareo, ny Ampinga fahazavana, ny paik’ady, SL dia eo akaikinareo.Inona indray no
mbola ho angatahinareo ankoatra izany ?
Ny asan’i KRISTY no hatongavana sy hisehoana izao.
Aza miandry azy ianareo
Efa nanome ny asany ho anareo izy tamin’ny Fitiavana izy mba ho Fanekena Andraikitra amin’ny asa izay ho
Ny heritreritra ny Planin’Andrialmanitra dia tsy ho azo raha tsy eo ny heritreritra rehetra.
Ny rehetra izay Iray ihany – ny Iray ao amin’ny Rehetra ihany sy ny kely indrindra sy halehibeny ny Homme-dieu eo
Ny lalana dia efa voafaraitra,efa misokatra ny lalana ankehitriny eto an-tany, ho an’ny olom-baovao.
Manavaka ireo olona manana Fanahy izahay, mampihakatra sy mampivoatra ireo Olona manana Fanahy rehetra
izay fantatray sy tsapanay fa eo akaikinay sy miaraka aminay izahay, ireo mendrika sy vonona ny hivoatra sy
Izahay,izahay Hiérarchie Planétaire,ilay zanak’olombelona voalohany tonga hommes-dieux afaka mampiseho ary
Kristy no lehibenay,ilay Andriamanitra ho anay Disciples eo akakiny : Mpampianatra hendry 7 (7 Maitres de la
sagesse) tarnainy indrindra.
Izahay no modely ary SL no mpampi fandray izay velona ka afaka mampitohy ny fifandraisana am-panahy sy ny
asan’ny Planin’Andriamanitra.Raha tsy misy an’i SL, ny Energie an’i KRISTY dia tsy hisy ny fototra hafahana
manaparitaka ny fampianarana sy ny hazavana hamirapiratra sy hiasa.
L’homme-dieu dia mandalo ny fiainana materilay eto an-tany homme-terre mba ho afaka hohenonina.
Ianareo rehetra dia sombipitik’afo Masina ny Hiérarchie ary ny andraikitra dia lehibe ka tokony ho fantarina tsara.
Ianreo dia hiatrika avy hatrany ny Marina,ny Loi des Energies : fantatro,miasa na miditra ao anaty ny programme
mifanohitra : tsy hanao ny asa aho.
Ny Heritreritra ao amin’ny Planin’Andriamanitra dia fijery maranitra tahakany an’ny Voromahery (aigle) ka izay
rehetra lalovany sy hitanny dia tsy misy afaka miala, any na dia ny madinika indrina aza hamantaran azy.
Raha fehezina dia mandeha amin’ny lalana mazava sy mahitsy : Planina tena matipaika,isaky ny hetsika izay hatao, sy
ny heritreritra mitodika amin’ny vatana .Ny toe-tsaina manao mission dia tafiditra ao anaty ny Personnalité.Ny
Lalàna ny nécessité dia tena azo tsara.Ny Planina dia mandeha aloha arakaraka ny fandaminana tsy mijanona ny
matière, sy ireo manodidina.
Ireo olana sy sakana rehetra dia tsy ho hita mihitsy.
Hijery manokana ny traikefa an’i SL aho mba hafahako miteny.
Ny sakana sy fihatoana dia ho lasa fanampiana, efa fantatrareo ve izany ?
Mizara ny hamantatra ny heviteny.Ny codes sy ny fononteny miafina dia mifanohitra.
Tsy misy hafa tsy ny Unité no hafantarana ny dikany sy ny heviny rehetra hatramin’ny farany.
Manana ny fahaizana ny hamantatra ny tena ilaina sy manandanja rehetra avy amin’ny « esprit de mission ».Avy
amin’izany no hitondran’ny feon’ny bitsibitsikin’ny Fanahy (intuition) anao hahay hisafidy.Safidy mivantana ao
anaty ny fahamaizana (urgence) na tena vohevitra tsara no ilaina,ny Fanahy mahaolona dia mampiseho ny fiainany
eo aminao amin’ny fanapahankevitra aingana hasehony ara-drariny.Izany no fitsapana eo amin’ny lalàna,ho
fanavaozana.Ny Maitre dia miahy sy mandinika ny zavamisy.
Izay rehetra fanerena mihantra amin’ireo Disciple, amin’ireo corps subtils dia tokony hianarana daholo.
Tokony ho fakafakaina tsara izay rehetra mahakasika ny antsipirihany amin’ny zavatra matière.
Ny ady sy tolona dia tena henjana tokoa ho an’ireo manakaiky an’i KRISTY.
Isika dia eo AFOVOANY Planin’Andriamanitra.
Isika dia tonga eo amin’ny « Fitsarana Farany » na « Jugement Dernier »
Ilay andro Hiverenan’i KRISTY indray ao amin’ny Fieheritreretan’ny olona ( les consciences), ao anaty ny
fiainana,ao anaty ny Loi sur Terre.
Ilay Ady farany, ho fitsapana ireo Mpiampinga Kristy (chevalier de Christ) ho an’ny zanak’olombelona vaovao
(Nouvelle humanité) : ireo Anjely – Fanahy mahaolona – miverina ao amain’ny Fahadiovana tanteraka sy mampiaina
indray ny fifandraisany sy fiombonany amin’i KRISTY : Ny RAY.
Ny ady dia natokana ho an’izay » Marina sy ara-drariny », ho afaka tanteraka amin’ny kolikoly sy ny fahalotoana,ao
anaty ny fandresena ny matière ( fiainana ara materialy), eo amin’ny fiainany, ho amin’ny Planin’Andriamanaitra.
Ny fijoroako, izaho Maitre Mauria, izay fototra ny Hiérarchie Planétaire izay manampy an’i Kristy ho
mpanelanelana miarka amin’ny avo indrindra, sy ho an’ireo Fanahy rehetra velona sy teraka eto an-tany, ary
Voafatotra ao anaty ny harona lehiben’ny matière ianareo, tsy misy ho afaka ao anatin’izany ianareo raha tsy misy
ny Famonjena sy fidiran’ny Herin’ny Fanahy Masina : ny Heriko.
SL no mpanelanelana ny Herin’i Kristy sy ny R1, Mivantana avy amin’ny Seigneur du Monde ary ny Zanany.Ary
LM izay Miombona tanteraka amin’ny SL, manelanelana ny Energie ny Fahavononana ao anaty ny vatan’ny
Fitiavana ny SL, ilay vatana hipetrahan’i KRISTY ankehitriny.
Ny Fitsarana farany no mametraka ny synthèse rehetra ao amin’ny matière : Ny réalité ny Lalàna ny Energies.
Ny science sy ny Lalàna dia IRAY
Ny olombelona dia tsy jamba akory, mahafantatra izy, tsy afaka ny hihala andraikitra izy na hiala tsiny izy.
Mamela ny lalàna ahanao ny asany izahay ary mametraka ny harofanina lehibe efa hatriny ela izahay.
Izahay dia miasa araka ny haben’ny Fahazavana (éclat de la Lumière), ny Fanahy mamirapiratra ny Disciple,ilay
« fanahy zanak’Andriamanitra» hanombka hipoitra.
Tsy misy ny adihevitra.Fa ny fankatoavana ny lalànan’i Kristy avy hatrany na ny fitsapana ao amin’ny kristy izay
mitoetra ho Mpanjaka lehibe.Ny Zavamarina.
Izay olona Fanahy velona ao amin’ny Kristy dia ho afaka amin’ny fiheritreretana ny zavatry ny tany intsony ka
handray ny fampitahana mihitsy raha tsy ny zavatra avo an’Andriamanitra : le Roi – Le Maitre – La loi de
Ny asa ao amin’ny tsy hita maso sy subtil dia mandeha irery,ny Fahavononana tanteraka ao amin’ny Fanahy
mahaolona dia lasa fianana ao amin’ny heritreritra rehetra sy eo amin’ny foto-pisainana maha olona (personnalité),ny
fomba fijery zavatra sy fandraisana izany, ny asa hatao, ny fandaharam-potoana.
Ny heritreritry ny fotoana
Ho jerentsika izany rahampitso.Hapetrakintsika eo hanoloan’ny safidiny ny zanak’olombelona :ny Fanekena
Miteny amin’ireo manana Fanahy mahaolona aho izay izy ireo no mandray vatana olombelona , na lahy na vavy eo
amin’ny tsingerimpiainany na incarnation marobe niainany.
Ny Fanahy – Anjely no mandray azy ireo mandritra ny expérience azy ireo sy ny fihakarany (élévation).
Ny heritreritrany fotoana dia tafiditra ao anaty ny tantaran’ny olombelona, ny marina,ny tantaran’ny tany ao anaty
ny cosmos, ny fandaminan’Andriamanitra.
Ny Finoana (FOI) dia asan’ny Fanahy mahaolona avy amin’ny maha zanak’Andriamanitra.Ny Fahafoizantena
(conviction) dia tsy avy amin’ny saina akory, avy amin’ny « cellulaire »izany.
Ny Saina tsotra (mental inférieur) no mametraka sakana, hanakona ny marina,ny Tetiharana an’Andriamanitra
Ny ady dia efa tonga izao, eo ambaravaran’ny Fo, ny varavaran’ny Matière – Fanahy masina mahaolona.
Tsy misy afa tsy ny Fahavononana manokana avy amin’ny tsirairay no hafahan’ny varavaran’ny Herin’ny Fanahy
masina mahaolona hivoa ao anaty ny heritreritra tsotra mahaolona eo amin’ny fiainana.Tokony avela hivoa foana
izany varavarana izany.Ny ahiahy, nyfanotaniana dia mety hampikatona io varavarana io avy hatrany.
Ny Disciple mpiampinga dia nahavita nifehy ny saina.Miahy ny vavahadin’ny Fo madio izy, mikajy tsara ny
fahadiovan’ny heritreriny, ny fahdiovan’ny vatany, manandanja avokoa ny zavatra rehetra.
Zavatra kely fotsiny dia mety hampikorotana ny sy hiteraka akony ratsy ka mitondra onja mahery hanamaloka sy
hanimba ny hazavanany Fo madio ao amin’ny Fanahy mahaolona izay hovoaloto ny zavatra ara-materialy.
Tsy misy toerana ho an’ny kolikoly izany mihitsy raha tena manana ny herin’ny Fahavononana ao anaty Fitiavana.
Ny Fahavononana no fiadiana ho entinao, ny Fitiavana no hafahana mampivelatra sy mampahomby ny Lalànan’
Miteny ny Lalàna foana isika isan’andro eto – Lalàna ny Univers, Lalàna ny KRISTY – Tany, Lalànan’i
KRISTY Cosmique. Iray ny zavatra rehetra.
Tsy ny finoana na karazana fivavahana hataonao no zava-dehibe no manamarika ny fotoana fa ny
Ny varavarana ny Fo dia tsy voarary kofehy volamena akory, avy amin’ny fiainana mifandimby no hananany lanja, ka
vita tsara amin’ny hazo sarobidy. Tokana ny fanalahidy, ny Fanahy mahaolona no manana izany.
Ao amin’ny équilibre ny Balance, ny varavarana dia misokatra.Ny Fahavononana no miboiboika.Ny
Fahavononana no manosika amin’ny asa.Ireo rehetra endrika maro miseho amin’ny fotoana no manokatra ny
lalana.Tokony hivonona ny amin’izany.
Ny Fiadiana entin’ny Mpiampingan’iKristy dia mihamaf y andro aman’alina.Tsy misy aloka, tsy misy fangarony na
dia kely aza, poti-tany na potiby – Ny symbole sy Réalité.
Voahodidina famantarana maro ianareoizay mitombo isan’andro raha vao mihatrika ady mafy eo amin’ny fiainana
aranofo (vie matière) ianareo, na ao anatiny na ivelany.
Ny Masom-panahy mahaolona dia mifoha ao anaty ny asan’Andriamanitra .Tsy misy sisintany mihitsy eo amin’ny
fiainana ara-panahy sy ny fiainana ara-materialy.
Ny firindrana dia tanteraka avy amin’ny famerimberenana : Fanamafisana ny fiadina sy haro, mandrafitra ny vatana
hisehoana, mitoetra aoa anaty ny cellule divin, mampihatra ny fepetra ny famirapiratana ny hasin’ny fahazavana.
Ny fampiharana ny Fahavononana tsy nisy fampivoarana sy fanadiovana ny Fo ho amin’ny asan’i Kristy dia tena
endrika ny fampianarana théorique avy amin’ny endrika aranofo fotsiny, ny saina no mitondra ny fianjeran’ny
Mpiampinga amin’izany.Izay rehetra endrika kolikoly dia mety hakasika ny Fo avokoa.
Hikatona ho azy ny varavaran’ny Fo raha vao miseho izany ka ho voaloto ilay Joyau divine.
Izahay Hiérarchie Planétaire dia manana ny fomba hiarovana izany.
Ny Science des Energies, ny Làlana, dia hatsangana avy amin’ny fepetra ny centre Mamiratra ary tsy hisy hery ho
afaka ny hanatona izany centre izany raha tsy mitovy aminy ihany.Hiverina ho azy amin’ny toerana niaingany avy eny
ivelany ilay hery tsy mitovy , araka ny tanjany sy lanjany.
Nametraka varavarana maro izahay, ary nametraka Mpiambina ihany koa marobe.
Ny fitaovam-piadina ny Mpiampingan’iKristy dia ny tohatohatra ny fahazavana (escalier de lumière), Fanekena
Andraikitra mandrampahafaty eo akaikin’ny Hiérarchie sy ny Maitres.
Efa niaina izany avokoa ianareo tamin’ny fiainana tany aloha.Handeha hiatrika ady ianareo, hiditra any anaty
fiainana materialy, hiaina ny Fanekena Andraikitra (engagement) tsy misy kolikoly,ary tsy hisy mihitsy afaka
handemy saina anareo ka ho handairan’ny kolikoly ianareo.
Mitondra an’i KRISTY ianareo ao anatinareo, ny Fahavononana ato amiko dia mampitombo hery izany.
Ny Fahavononana ato amiko dia nomena anareo ao anaty ny Fanekena Andraikitra.
Ny Toe-tsaina sy toe-panahy ny SL dia mikoriana ato anaty ny teny izao, ny Fitiavany, ny Fahavononany.Ny
litera sy teny rehetra eto dia endrnkia ny Fiombonana aminareo, manefy sy mandrafitra ny Mpiampinga Disciple,
misy ny Hery lehiben’i Kristy ao aminareo.
Mandray ny akon’izany avy hatrany ao amponareo ianreo, ianareo dia mifandray amin’ny « Point de Ralliement ».
Ny Ampinga(Epée) dia eo anolona anareo.
Ny mahita dia feon’ny fiehritreretana (intuintion), ny fahitana miserana dia fampatsahivana
Inona no atao hoe : Feon’ny fieritreretana (intuition) ?
Ny feon’ny fieritreretana dia feon’ny Fanahy mahaolona, tsy afaka hiaina izany ianareo raha tsy voadio sy vonona
ny handray izany ny tenanareo.Misy fomba maro no hafahana mandre izany feon’ny fieritreretana izany ary samy
manana ny endrika hisehoany izany, ao anaty ny antanatohatra ny amin’ny Fifandraisana Masina amin’ A
Avy amin’ny asa famerimberenana tsy miato, ny Fanompoana ny asan’i Kristy, izany no manamafy ny fidirana ao
amin’ny Fanahy mahaolona amin’ny conscience materialy.Tokony hiainga avy amin’ny aina ny fahenoana izany.
Fitiavana – Fahavononana – Fanekena Andraikitra, ireo no TELO izay IRAY.
Ny fahadiovan’ny fiananareo no antoka voalohany.
Hiverina amin’ny teny indray aho, mamerina miteny aho, fanampiana ao anaty ny Fahatsorana sy Fahatsaran’ny
Fiombonana NO ILAINA ;
Mioty ireo formules tena ilaina ianareo arakaraka ny Fihakaran’ny (élévation) Fanahy mahaolona anareo ary
hiverina hamaky ity boky ity indray iananreo ka hianantra izany ianareo.
Ny boky soratako dia fampianarana.Hanome hery Disciple maro izy ity.Izany boky izany no lalakombana sy
Ny famakiana matetika ireo boky ireo dia mandrafitra ny lalàna hizoran’ny Fanahy mahaolona sy ilay
Mahazanak’Andriamanaitra anareo ( Monade ), ny Olo-Masina no mitarika sy mitondra.
Ny Fanahy mahaolona dia vatana, ny olo –Masina dia tsy misy vatana, synthèse de la perfection, ny Fiombonana.
Ireo rehetra izay manana ny Monade ( Andriamanitra ao antampon’ny loha – hazavan’Andriamanitra ao anaty) dia
iray ao anaty ny famirapiratana, ao anaty ny Planin’Andriamanitra.Ireo Olo-Masina(etre divin ) no manodidina an’i
Kristy.Ny Fanahy mahaolona no mampitohy ny incarnation,ny Anjely no mamalyireo Olo-Masina, mandondona ao
amin’ny varavaran’ny heritreritra materialy.
Izany no lalana mitondra amin’ny porofo, ny foibe miaina,ny famirapiratany
Ny sakana rehetra dia avy avy amin’ny zavatra materialy rehetra feno kolikoly isaky ny dingana
Lalovan’ny Disciple izay, misy ny ady goavana hatrehany mba hafahany mandroso sy mijoro, manantateraka ny
Misy ny fotoana hatongavana amin’ny ady mivantana hifanatrehana mihitsy
Isika izao dia ao anaty ny ady ara-tsaina, izay mitaky ny handaozana tanteraka ny Fihetsempo (émotion).Izany no
tanjona ny incarnation marobe lasa taloha (fahatongavana nofo taloha).
Miditra eo amin’ny zava-baovao ianareo izao : ny Fiainana Masina ao amin’Andriamanitra ara-tsiansa ary manamafy
izany ianareo ao anaty ny fiainana ara-drariny eo aminareo, ny asa rehetra hataonareo.
Ny heritreritra ao aminareo no lohalarana avoaloh
Ny amin’izany.Avy amin’io no hanangananareo ny Planin’Andriamanitra izany, ny asa, izay miaraka amin’ny
fanatanterahana sy ny fomba hiainanareo izay traikefa izany.
Izay Hiainan’i SL mba haseho aminareo ny lalana.
Tsy afaka mihahy manokana izy amin’izany satria tsy afaka hanazava isaky ny teny mivoaka izy.
Ny ady dia isaky ny tokonambaravaravarana ny fihetsempo sy ny saina.Ianreo dia manana ny hery rehetra afaka
Manana ny fanalahidin’izany ianareo.
Takaro ny fanizingizinan’i Kristy, ny fanizingizinanay tsy mijanona ho an’ny famantarana ny Ampinga Fahazavana
sy ny Heriny.
Mahafantatra ny tantara ny Tany eto ianareo, ny tantaran’i Frantsa, ny tantaran’i Kristy eto amin’ny taniny.
Izany ny vaovao an’Andriamanitra : ny fiadiana entina mandresy avy amin’ny fisainana masina an’Andriamanitra, ny
Fanahy mahaolona, ary ireo rehetra mandrafitra ny Planin’Andriamanitra.
Raha tsy misy fiombonana fiheritreretana ao amin’ny Point de Ralliement, ao anaty ny fomba fiaina scientifika ny
Mpiampingan’i Kristy, izay nanatsara endrika hatrin’ny ela ny vatany ho tafaray amin’ny Planina, dia tsy hisy tohiny
ny zavatra rehetra, ny fitohizany mankany amin’ny hery sy tanjakan’ny Ampinga Fahazavana.
Ny sasany amin’ny Fanahy ny olona dia matanjaka kokoa noho hafa sy manana ny fahadiovana sy Fanekena
Andraikitra avy hatrany.
Izy ireo dia efa vonona amin’ny Fahaterahana .Izy ireo no ho mpitari-dalana.
Manoratra aho ho anireo Fanahymahaolona misedra ny ady.Tsy tokony halemy paika na ho sery izy ireo.
Ilaina ny fotoana hitokana-monina.Tsy afaka ny hiatrika ady ianareo raha tsy maka hery ao Ifotony.
Ny Vavaka maraina (Méditation) dia tena manandanja lehibe tokoa eo amin’ny Fiombonana miaraka aminay
Maitres, mba hafahanareo miaina tsara.Ny zavatra rehetra dia miankina amin’ny Fahazavana avokoa, ny Tanjaka ny
Fahazavana ao aminareo, fiarovana Masina an’Andriamanitra sy Fanekena Andraikitra izany.
Raha mbola misy ny ady amin’ny zavatra aranofo sy materialy, ny Fahazavana ao aminareo dia hanjavozavo ao anaty
ny ady izany ka tsy hafahanareo mihatsika tahaka ny vatobe, ny herinareo rehetra dia ho lany, ny vatanareo,eny
ianareo mihitsy aza.
Izahay Hiérarchie dia miandry anareo ny havitanareo ny fifehezana ny vatanareo, sainareo, fihetsemponareo avy
amin’ny herin’ny fomba fiainana ara-panahy ao amin’ny Fo madio miombona ao amin’ny Point de Ralliement.
Tsy misy zavatra hafenina eo amin’ny asa hatao rehetra,tokony hamafisina sy lazaina daholo mandrampahatonga eo
amin’ny Fiombonana Tanteraka, ny feo ny heritreritra malefaka sy milamina tsy voahozongozona.
Ho faritantsika ny hoe Ratsy.
Ny RATSY dia ny tsy fankatoavana ny lalànan’ny FITIAVANA Original ao anaty ny Planina farany
ambany indrindra ny Matière miseho hita maso.
Ny Ratsy dia zavatra mandalo vonjimaika ihany ary miditra antsehatra eo amin’ny Planina eto an-tany mba tsy ho
feno sy tsy hisy Fanahy.
Amin’izao fotoana izao isika dia tonga eo amin’ny fotoana hanjavonan’izireo eto an-tany sy any an-danitra.Tokony
hiady amin’izany isika.Izy ireo no nihavian’ny zavatra ratsy sy mampijaly - mangirifiry eo amin’ny tantaran’ny Tany.
Fa ny fotoana hifaranan’izany dia ao anaty ny « Andro fitsarana Farany » izay handraisanareo anjara.
Ankehitriny dia mitambatra ny Fanahy mahaolona marobe miasa ao amin’ny Planin’Andriamanitra miaraka amin’i
Kristy hiady amin’izireo.
Tokony hampitandremana sy hilazana avokoa tsirairay hieritreritra aloha.
Ny Fanekena Andraikitra ny Mpiampinga Fahazavana Kristy no Hery manosika ny Planin’Andriamanitra Hiseho
eto an-tany (voninahitr’Andriamanitra)
Tena fotoana mafy tokoa izao : ny Fiombonana ao anaty Fahavononana, ny Fitiavana sy Fanekena Andraikitra
tanteraka no manome ny Groupe ny Disciples, ilay vanja hampipoaka ny Fitsarana farany sy ny fanatanterahana
mandeha ho azy tsotra izao ny : Lalàna ny Energies.
Izany no manafaka ny Disciple,ny fanatanterahana mivantana ny Lalàna,ny asan’ny Siansa mivantana
hatramizay,izay ho hitanareo ao anaty ny boky sy hafatra rehetra ho fananganana ny hoavy, eto miaraka amin’i SL.
Hiresaka ny moban’ny KARMA isika.
Hevitra moban’ny Karma satria ny lahatra ny olona no resahana amin’ ny maha be pistopistony azy ity, eo amin’ny
tantara ary Seigneurs du Karma irery no afaka Mitsara ny asan’ny olona.Izy ireo no mampihatra ny Lalàna eo
amin’ny varavaran’ny Fihakarana ao amin’Andriamanitra (porte d’élévation)
Izay rehetra miasa ao amin’ny Planin’Andriamanitra dia manaraka lalana hafa izireo.
Hapetraka ao anaty ny raharaha ny Planina izy manomboka eo amin’ny Fahaterahany ary nahazo fanazarana .Tsy
manana heritreritra ny amin’izany izy eo ampihandoana ary manitsy ny fiainany hifanaraka amin’ny Herim-panahy ao
anaty sy ny tanjony ao anaty ny fangalana traikefa sy ny fahamatorana eo amin’ny vatana, saine , fo.Tsy
mahasakana ny fahasahiranana sy olana mety hiseho izay mampianatra azy anefa izany.
Eo amin’ny programme ny Mpiampinga Fahazavana Kristy isika izao, ny programme ny Fanahy mahaolona ny olona
ny Mponina avy amin’ny Etoile Polaire du Nord, ireo Groupe ny Fanahy mahaolona voahosotra sy nomanina
hiady ho an’ny fanjakan’i KRISTY.Efa nampiseho izany izy ireo teo aloha.
Izy ireo no hampitsry indray eto an-tany ny civilizasiona vaovao eto an-tany.Izy ireo no Olombelona vaovao.
Manana ny Karma izay tokony ho Hefaina izy ireo ary ny Vavaka haverimberina tononina (Mantrams) izay nomen’i
SL no manafaka azy ireo amin’izany Karma tamin’ny fiainana efa lasa izany, manangana ny Fiombonana(Unité),
mitondra mankany amin’ny Fandresen’ireo Disciple Mpiampinga fahazavan’i Kristy - Fanafahana azy ireo amin’ny
sakana ny fiainana aranofo sy materialy mba hafahany manokantena tanteraka amin’ny tanjon’ny Fnahy mahaolona
zanak’Andriamanitra – Miaro an’i Kristy, ny Planin’Andriamanitra, ny Lalàna, ny lalàn’i Kristy ho an’ny rehetra.
Tsy hisy fiverenan’i Kristy instony aorian’ny an’i SL.
Mampihena ny vesatry ny Karma eto an-tany izy ankehitriny, manasitrana sy manorina ny fepetra rehetra
hampihakarana ny Fanahin’ny zanak’olombelona (élévation de l’humanité)
Ireo Karma ireo dia fitambaran’ny asa rehetra hatramizay no mitarika ny fanamboarana – fanadiovana ary izany no
midika fa voaloto ny corps subtils (vatana tsy hita maso eo amin’ny olona) raha misokatra ho amin’ny varavaran’ny
Fahalotoana, ary miverimberina matetika izany, raha mbola tsy voafafa sy voadio ireo trosa Karmique.Izany no tena
fiainana akaiky ny Fanahy mahaolona izany izay hiainana ao amin’ny fahaveloamana ny vatana.
Ny rehetra dia mahazo ny sahaza azy avy.
Ny tsirairay dia mandalo sedra sy fitsapana daholo araka ny zavamisy sy fisehoany mandrampahavoafafa sy voadio
ireo Karma ao aminy, hafa-trosa tanteraka.
Raha tsy mahavita izany izy dia miverina miaina indray izany fitsapana sy sedra izany izay lesona ho azy ao anaty ny
Lalàna, Lalàna ara-drariny sy marina, Lalànan’i Kristy, Lalànan’ny Energies.
Eny, azo jerena amin’ny toe-piainana ny fatran’ny Karma izay ho hefaina. Tsy mitondra Fitsarana amin’izany
anefa izahay Maitres.
Manaitra na mampifoha ny Hatezerana ao anaty dia mitaky ny fanalana sy fialàna amin’izany avy hatrany.
Ny Mantram ny Karma dia Fanafahana. Ny asa dia isan’andro.
Mantram ny Famelankeloka.
« Que tous ceux avec qui j’ai lutté
Dans les incarnations passées jusqu’à aujourd’hui
Soient bénis, qu’il leur soit pardonné
Qu’ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent dans la Lumière de l’Amour Divin »
Fantaro fa izay rehetra zavatra efa lasa dia mitsangana sy mametraka sakana na manampy anao.
Ny Lasa – Ny Ankehitriny – Ny Hoavy dia mitambatra ho iray raha vao teraka eto an-tany ny olona iray,ny
lahatra sy anjara mandrapahatongan’ny fahafatesany sy ny Fanafahana azy – Fihakarana teto an-tany (élévation
Mianara mamaky ny lalam-piainana.Ho fantatrao izay zavatra tena ilaina ho amn’ny Fahafantarana ny Fanahy
mahaolona, ary ho fanamafisana sy fanambarana fa eo anilako ianareo.
Ny famonjena anareo dia ao amin’ny Fiombonana miaraka Aminay, Kristy sy ny Hiérarchie.
Ho voafafanareo avokoa ny Karma ao anaty ny Fahavononana madio tanteraka ao aminareo miaraka amin’ny
fiarovanareo ny Lalànan’i Kristy.
Izany dia resaka na fiainana na fahafatesana
Ny Finoana ao aminareo no Mampiombona antsika avy amin’ny Herin’ny Fanahy mahaolona, any ivelan’ny vatana
Ny famohazana ny Fahazavana dia fanadiovana : avy amin’ny vibration ny Fitiavana,ny ambony indrindra amin’ny
émission ny tanjakan’ny Fitiavana sy Fahavononana.
Tsy manoratra afa tsy avy amin’ny Fahavononako aho.Miombona amin’ny SL.Fitiavana sy Fahavononana, ao
anaty ny fatomombanana tanteraka ny Planin’Andriamanitra izay ny rehetra no manome lanja izany, ny rehetra ao
Amin’izao fotoana tsy manatsahala izao, ny fanavotana dia miasa avy hatrany.Tena chance ho an’ny Disciple izany,
ho anireo izay tara ary tokony ho faingana izy ireo mba hanatanterahany ny anjarany
Ny fahatarana rehetra dia ny Karma no antony.Izay rehetra nomena tamin’ny fotoana lasa mba hananana ny
fahamatorana dia tsy azo hifanamboarana (conciliable).Tena Fanekena Andraikitra tanteraka » vatana sy fanahy
mahaolona » izay Fanavotana sy fiainana vaovao.
Amin’ny fotoana farany tahaka izao, ny Herin’ny Fanavaoozana dia mitaky asa avy hatrany.
Izany dia porofo ny Fanekena Andraikitra ny Mpiampingan’i Kristy.Vitsy no afaka manatanteraka izany noho ireo
fahatarana efa mitambatra maro.
Amin’izao fotoana izao ny Drame ny olombelona : niandry ela loatra,tsy niaro ny didin’i Kristy, ny Tany sy ny
Izao fotoana Fanavotana izao dia vintana ho an’ny olombelona, ny Fanehoana ny Planin’Andriamanitra, ny
fanatrehana an’i Kristy, ilay Fiainana Vaovao.
Hireska ny momba ny tsy Fahalalana sy ny Finoana isika.
Ahoana ny hiadian’ny Disciple amin’ity tontolo feno fankahalana ity : ny Fiainana aranofo sy materialy feno
Nametraka Disciple izahay izay hiasa hametraka sy hampahafantatra ny Planin’Andriamanitra, hampianatra –
hanabe ny fisainan’ny olombelona mba ho ny Finoana ho afaka mandroso eo amin’ny Siansa. Maitre Djwal Khul
nanome fampianarana in-droa, fa tsy tamin’ny fiteny Frantsay izany ary izany no nahatara ny fahafantaran’ny olona
azy. Ilay fampianarana dia nijanona teo ampelan-tanan’ireo olom-bitsy raha toa ka tokony hozaraina ho an’ny
rehetra izany.Tokony hampiharina ny lalànan’ny Groupe : ny zavatra ho an’ny iray dia ho an’ny rehetra ihany koa.
Ny Foibe – France – ny Famirapiratana eo amin’izao tontolo izao.Ny fampianarana ho an’ny rehetra manerana
an’izao tontolo izao miaraka amin’izany.
Izany dia avy amin’ny Herin’ny Famirapiratan’ny Foibe izay tsy ampy eto amin’izao tontolo izao ankehitriny.
Mampihatra ny siansa ny Energie izahay ary ny Planin’Andriamanitra dia sary iray lehibe voamarina tsara izay
harainay fatratra.Izany no mitondra aminin’ny fahombiazan’ny Projet Terre, Fandresen’ny olombelona vaovao.
Miasa izahay : manana ny modelin’ny Hiérarchie ianareo ary ny fankatoavana ny Lalànan’ny Fiombonana.
Vita tamin’ny ihany.
Amin’izao fotoana izao ianareo dia tsy mahalala ny siansa ny Energies, miankina tanteraka amin’io anefa ianareo
ary ny ady ara-tsiantifika – ao Frantsa – mba hampahafantarana sy hampiahinoana ny lalana ambony, ilay loharano
tokana ny zavatra rehetra.Izy ireo dia Disciples eo amin’ny lalana, Disciples tanteraka,ilay manao ny drafitra ny
Ilainay avokoa ny rehetra.Tena maika ny Fanamafisana sy filazana izany.
Ka ny Heriko rehetra hampihakatra ny Fahavononana ao aminareo amin’ny asa.
Raha tsy misy asa, dia tsy hisy Fahombiazana.
Tsy afaka ny hiditra an-tsehatra izahay raha tsy ianareo no manao ny asa voalohany, alohan’ny fiasan’ny
Herinareo mitokana araka ny Fanekenareo Andraikitra izay manetsika sy miantso ny Herin’Andriamanitra ao
Ny Fahavononana dia ao ami’ny Saina, asa azo tsapain-tanana, ny Fanekena Andraikitra tanteraka ary manetsika
ny onjan’ny Fahazavana, izany dia donan’ny Energie manako hatrany amin’ny Hiérarchie.
Izahay – ny Hiérarchie rehetra : Hiérarchie Planétaires sy Hiérarchie ny Tany.
Manana ny fomba maro ho entina miasa izahay noho ireo Disciples nanao ny Fanekena Andraikitra, tsy misy hafa.
Ny andraikitranareo dia lehibe tokoa eo anilanay.Tsy manana afa tsy ianareo izahay, vonona avy hatrany.
Ankehitriny, mitovy amin’ny rantsan-tanana ny isan’ny Disciples Mpaimpinga Kristy.
Raha mamaky ity boky ity ianareo hatreto, dia tonga eo amin’ny Lalana ianareo.
Ianareo dia isan’ireo mponina ny Etoile du Nord.Miandry anareo izahay.
Miresaka ny Planin’Andriamanitra aminareo aho, miresaka ny tantara, miresaka ny siansa, izaho Maitre Mauria izay
maliza amin’ny rehetra, mba hafahanareo mahazo an’izay fampianarana efa nomena teo aloha.
Ao anaty ny famerimberenana foana dia mitambatra tanteraka ny herintsika ao anaty ny Fahavononana, ny
Fahavononana ny Fitiavana sy ny Fitiavana Mamirapiratra ny Herin’i Kristy.
Ny Boky voalohany teo aloha dia fampidirana ny Tanjakan’ny Herin’i KRISTY izay mitambatra ao amin’i SL –
Ao anaty ny fanatanterahana ny Planin’Andriamanitra isika izao ao amin’ny Ivony.
Tokony ho hazonareo ny Fampianarana vaovao avy amin’ny fahatakaranareo, avy amin’ny famakiana ireo boky
nosoratan’i SL sy ny fikarohana hataonareo.
Tsy misy sekoly, tsia.Fianarana avy amin’ny Traikefa azo amin’ny fiainana sy ireo rehetra zavatra azonareo
fitadidiana sy tahin-kevitra, ny mandray izay tsara amin’izany. Tena avy amin’ny Fananana Fisainana sy heritreritra
vonona ny hivoatra izany, ary avy amin’ny fahafoizantena ny tsirairay, fikarohana mandeha irery, ny fahaizana
manavaka sy manivana ny zavatra hianarana, ny Fieritreretana, mandrampahatongan’ny hahitanao sy hafahanao
mitazona sy mandray izay Tsara sy Mahasoa ary Ilaina.
Ireo boky dia tsy siantifika akory.Manokatra ny varavarana ho amin’ny Fahalalana ireo Boky.Tsy manery mihtsy
izahay .Tsy manakany ny Eritretrareo izahay izay miasa ao amin’ny Fisainana (Mental inférieur).
Ny Visty teny dia midika fahafahana.Efa manome zavatra maro sesehena ianareo mba hanekenareo Andraikitra ao
anaty ny Fandresena eo anilanay.
Izay rehetra nolazaina teo aloha rehetra dia fototra izany, fa tsy fampianarana feno ka ho lasa sakana.
Mihoatra noho ny Fahafantarana, dia ny Energie Kristy no ho entina hampitaina.
Ny fampianarana vaovao dia tsy mitovy amin’ny taloha zato taona lasa, izay misy tanjona faneriterena.
Izy iray manontolo ary mety amin’ny fotoana.Mitondra ny Energie vaovao : Ny Tanjaka ny Herin’i Kristy vaovao
izay tsy misy tahaka izao hatramizay ao anaty ny fanatanterahana ny porofo avy amin’Andriamanitra.
Ny olona izay tsy mamaky ny Clefsdufutur, ireo izay tsy afaka namaky isan’andro na tsy nahafantatra ny hafatra ny
Hiérarchie sy SL, tsy mahafantatra ny foton-dehibe Cosmique sy ireo porofo maro samihafa izay nomenay ho
Ny adidinareo dia ny Manaparitaka sy mampahafantatra ny olona izany vaovao izany,ny miteny izany, manaitra ny
feon’ny Fieritreretan’ny olona akaiky ny lalana.Ny Planin’Andriamanitra dia mbola tsy fantatra ny olombelona
Ireo porofo na asa goavana
Ny fanapahana ny Fahatezerana teto ambon’ny Tany : Ny tany dia tsy mifandray intsony amin’ny foiben’ny
Ireo olona tsy manam-panahy sy feno fahalotoana sy kolikoly dia mifamomo daholo. Ny Lalàna ny Karma na Lalàna
ny Energie : Ny fotoana ny Andro fitsarana Farany.
Ireo zazakely rehetra vao teraka dia tsy mitondra intsony ny « Mikroba ny fahatezerana » na « germe de la colère »
Tsy misy intsony fahafahana miteraka zaza tsy misy Fanahy mahaolona, raha vao misy ny Fanekena Andraikitra
vaovao : Ny antso amin’ireo Mpiampinga Kristy dia varavarana ho amin’ny Fanavaozana, hihaona izy ireo !
Ny Fo madio hanjakan’ny Fanahy mahaolona miasa ao amin’ny Kristy dia miteny, ny Fahavononana manosika ho
amin’ny asa ary ho tanteraka avokoa ny asa rehetra.Efa nandingana ny tokonam-baravarana izy sy niditra ao
amain’ny fiainam-baovao.Avy amin’izany no handraisany ny fanampiana ary miaina avy hatrany ny Hafaliana ao
amin’ny Fanahy mahaolona izy.Ny Fahavononana dia tsy mandao azy intsony.SL dia efa niaina izany.Fantatrareo
Fahavononana tsy misy Fitiavana dia tsy hahomby mihitsy, tsy maintsy rendrika izany.
Mampianatra anareo ny Lalànan’ny FITIAVANA TANTERAKA : ny FAHAVONONANA ao anaty
Rahampitso, hiresaka ny : ny Sedra sy Fitsapana dia mitaky asa ho amin’ny Fanavaozana - antsitra-po.
Ny sedra sy Fitsapana dia mitaky fanavaozana.
Isika dia ny fitambaran’ny rehetra, izahay Maitres, sy ireo Ambony indrindra noho izahay.Ny rehetra dia
natsangana mba hifameno sy hifanampy ao amin’ny 7 Rayons izay mitambatra lasa 3 ary lasa 1 amin’ny farany.
Ankehitriny dia mitambatra isika ao anaty ny fitambarana ho Iray avy amin’ny Asan’i Kristy sy ny fanotronanay
rehetra Mpiara miasa sy Mpanompo ny Kristy, mba hanampy amin’ny Fanatontosana ny Planin’Andriamanitra dia
tena ilaina tokoa.
Ny Rayon 1 ny Fahavononana dia voalohany indrindra ny Hitambarany ao amin’ny ho 2 ao anaty ny vatana izay
mitondra mivantana ny porofo, SL
Ny vatana nofo dia fitambaran’ireo dingana maro samihafa natrehana sy nandalovana, izay ny rehetra no nitondra
ny anjara asa hatongavana amin’ny fahombiazana izany, hatrany amin’Andriamanitra sy ny Lanitra hatramin’ny
hatongavany ety an-tany sy ny fiainana ny olombelona.
Efa ion y Fandresena an’i Kristy, ny Fanavaozana nataony, sy ireo Disciple izay hamita ny adidiny araka ny
fikirizana sy fahafizantena ao amin’ny olombelona eo ambany fahefan’ny Hiérarchie ka izay niainan’i SL dia
hiainan-tsika ihany koa : Ny Voninahitr’Andriamanitra, ny Fahazavana Mandrakizay ao amintsika eto ambon’ny
Ianareo dia napetrakay amin’izay toerana, firenena izay mety ilàna anareo, arakaraka ny adidy hataonareo
Miandry ananreo ny Asa hanirahana ananreo.
Tsy afaka mandeha ivelan’ny haraton’ny Energie Divine ianareo, izay efa norarihana nandritra ny millions
d’années tao anaty précision, nandalo sivana tsara, naverina foana mba hahatratrarana ny tanjona.
Ny tsy famaliana ny antso hataonay dia mankany amin’ny fanapahana tanteraka ny fanampiana avy aminay.
Miara miasa daholo ny rehetra : Maitres sy Anjely, Hiérarchie de la Terre, ny Disciples Nanaiky Andraikitra avy
hatrany manomboka amin’ny ambony indrindra araka ny laharana misy azy.
Ny olona mahafantatra nefa tsy manao na inona na inona dia meloka eo hanatrehan’ny Lalàna.
Izy dia voahosotra mba hiasa ho an’i Kristy nefa mandà.Manangana hery mefanohitra izy ka dia mizaka ny voka ny
izy, miady mafy vao afaka ao izy. Irery izy, ary tafiditra ao anaty olona mora ho tratry ny fihaihaina.Mampijoro ny
fonja hihazonana ny Energie izy, avy amin’ny Fitiavantena, ny Fahalotoana izay mitoetra ao anatiny.
Ho anay Hiérarchie dia, tsy ao anaty ny Planin’Andriamanitra intsony izy fa very,tsy afaka handray intsony ny
adidy sy asany.
Ny fanatanterahana ny Planin’Andriamanitra dia avy hatrany. Izao dia izao i Krity Vaovao no Mitsangana.
Tsy afaka mampihemotra izany isika fa maika.
Ary ny olombelona dia mifamono na aiza na aiza, ary ny vehivavy dia vohaolana sy hampijaliana sy vonoina ho faty
isan’andro izao, ny hafa mifety sy miliba ho an’ny andro farany ho azy ireo.Mba mahita ny zavamanjo ny Tany izy
Ireo zavamanodoka sy mamitaka dia tena matanjaka noho ireo sarisarim-piainana natsangana hamoronana tontolo
hafa, nefa ireny dia zavapoana iahany satria dia zavatra aranofo materialy teraka avy amin’ny Fahamaizinana, ny
fiainana mora ho velona ny olom-botsy.
Ny fiverenana amin’ny Fiainana Tsotra dia Fanasitranana ny zanak’olombelona.
Izahay dia eo akaikinareo, izahay Maitres, mba hanampy an’i Kristy ao anaty ny asany ary SL dia miady mafy aoa
anaty hy tsy fahamatorana sy ny illusion mahazo ireo izay manantona sy akaiky azy.
Inona no andrasanareo amin’ny Famonjena ny zanak’olombelona, ny mba hiarovana ny Feon’i KRISTY ?
Tsy misy Fanekena Andraikitra raha tsy misy ny Traikefa. Avy amin’ny asa hatao ihany no hafahanareo mianatra
ny hanome valiny.
Tokony hiaina izany mba hafahanay manampy anareo.
Efa ireo ny fitsapana sy sedra : hampisehoy ny Fahavononana hitondra ny Fanampiana an’i Kristy, an’ny
zanak’olombelona, hiaina ny fiainan’ny Mpiampingan’i Kristy marina.
Ny fiomanana amin’izany dia hafahana mahita tsara ny dingana hizorana eo amin’ireo olana lalovana amin’ny
fiainana, sy ireo sakana mijoro eo alohanareo satria ny Fanekena Andraikitra noraisinareo dia mamerina ireo
zavatra aranofo sy fihetsempo, fisainana ambany sy tsy mahasoa hiverina, ireo zavatra aranofo feno kolikoly.
Ary eo amin’izany mihitsy no miditra manampy izahay.
Avy amin’ny Asan’i Kristy hataonareo, no hafahan’ny Fahazavana miady amin’ny Aizina.
Tahaka an’i SL, ianareo no foiben’ny fizarana ny Energie fanavaozana eo amin’izay toerana misy anareo – ao
amin’ny Fiombonana, ao amain’ny Finoana, ao amin’ny Fanahavononana, ao amain’ny Asan’ny Fitiavana : Fanahy
Tsy afaka ny hiantso anareo ho Disciple aho sy ny hoe Mpiampinga raha tsy efa tena mandray ny Fanekena
Andraikitra ao amin’ny Fanavaozana ianareo sy mampihantra izany. Ny Lalàna ny Energie no Maitre.
Efa nadray ny fiadiana ianreo mba hafahanareo mandroso eo hanatrehan’ny zavatra rehetra.Miombona sy
Hampisehoy fa avy amin’ny asanareo, ianareo dia miaina ny Fanavaozana.
Io no fitaovana tokana mba hanafainganana ny fanovàna sy mampiombona anareo aminay, amin’ny Epée,eo
ambon’ny fikorotanan’ny Tany, fahasimbana.
Ny teniko dia Andraikitra, Fahavononana, Baiko aho an’ny Mpiampingan’i Kristy. Ny Fnavaozana dia tsy
Ny teniko dia Fampitandremana. Tsy misy hindra-Fo amin’izany.
Ao amin’y Fahazavan’ny Fanekena Andraikitra, ho voavonjy ianareo, hanavotra an’izao tontolo izao ianareo,
Kristy dia eo akaikinareo lalandava.
Aza manaiky hihoaran’ny Fitsapana sy sedra ianareo, hanafotra anareo, hanapoka anaareo na hoe tsy hanana
hiery intsony iananreo hiombonana aminay, hatsangano ny Ampinga fahazavana izay tsy natao ho an’ny olona
malemy sy ny osa.
Kristy dia very olona sarobidy sy mpiara-maisa iray raha very any anaty rano.
Rahoviana ianareo vao hihetsika hiasa ?
Tokony havotana ny zanak’olombelona vaovao.
Ny anjara asanareo dia ny Milaza ny mampahafantatra izany.
Ny 3 dia midika ny Fahatanterahana, ny Fisehoana hitamaso ny Planin’Andriamanitra, ny Fanekena Andraikitra
ny Lalànan’Andriamanitra ao anaty ny asa hataon’ny olombelona.
Tsy azo hidiviorana ny fotoana,ary isan-tsegondra izany.
Ny Lalàna ny Karma dia hihantra, Karma ny Groupe, Karma manokana ny tsirairay.
Ny korontana lehibe hiseho dia hakasika ny Groupe iray manontolo, mety ho olona marobe ho faty.
Tsy hiresaka ny tantara ny Mponina isika, raha tsy hoe hanamarika fa ny mponina ao Azia karzan’ny Mongol dia
manana Karma mavesatra izay tsy ho voafafa amin’ny fakana traikefa amin’ny fiainana mihitsy.Tsy tokony ho gaga
isiska amin’ny mety ho fisehoan-javatra.
Ny Tany dia tsy maintsy mamaly ao anaty ny Planin’Andriamanitra, ny fotoanan’ny Fanadiovana lehibe, toerana
ho an’ny vaovao.
Efa maro no nomenay ary mbola ho maro no omena.Izany dia ny fisehoan’ny Planin’Andriamanitra, ny Hiérarchie
Planétaire ho famonjena ny zanak’olombelona.
Ny fihakaran’ny Tany no mitondra ny zanak’olmbelona vaovao ao anaty ny Planin’Andriamanitra : Toerana tsy
azon’izay rehetra mbola tsy vonona ny hanaiky handray andraikitra miaraka aminay.
KRISTY no famantarana sady izy ihany koa no ilay Herin’Andriamanitra nomena ny Fanahy ny Tany. Raha tsy
misy an’i Kristy dia tsy inona vitae eo.
Kristy no vato ifaharan’ny Plani’Andriamanitra,ny Fanavaozana, ny Projet Terre.
Izy dia nalefa mivanatana avy any amin’ny Siruis mba hanavotra ny Tany syny zanak’olombelona, ny olombelona
rehetra izay manana Fioana sy Fankatoavana ny Lalàna, Lalànan’ny Fitiavana, Lalànan’ny Fiombonana manetika
(loi d’Unité Magnétique)
Izahay Maitres dia mandray Andraikitra sy manaiky ny ho eo Akaikin’i Kristy, ilay 7 izay 1
Tsy afka ny hiteny ianareo hoe tsy Tia anareo izahay, sy hoe navelanay irery ianareo amin’izay mahazo anareo.
Efa nahazo ir eo Fanampiana rehetra mety ilaina ianareo.
Tsy namaly ny Feon’ny Fiheritretana ianareo (intuition), ny fampitandremana izay nampanenona tao anaty ny
heritreritranareo satria ianareo dia tsy nanaiky ny handany fotoana amin’ny fiainana izay manahirana.
Efa io ny nœud Gordien izay namafisinareo ary mbola hamafisinareo hatrany isan’andro, voafatotra ny rojo vy ny
fiainana materialy ianareo isan’andro nefa tokony hitady fanafahana amin’izany isan’andro mba hafahanareo
Mihakatra (mitsigerim-panahy, velona Fanahy mahaolona zanak’Andriamanitra), sy miasa ho ana’Andriamanitra.
Ny zavatra mahazo ananreo dia ny Tantaran’ny Groupe ny KRISTY – CDF – ireo izay efa Niaraka hatraminy
ela teo amin’ny lalana 2011 – 2014.
2015 no nametraka ny fototra ny Fanavaozana.Avereno vakiana.Ny asa rehetra dia mitantara izany.
Ny Fandresena dia efa nolazaina ary mbola mitohy hatrany : izany dia nosoratana tamin’ny soratra afo teto an-tany.
Ny Fitomboka avatsa ny Fandresena dia tsy azo esorina.
Izany dia Joyau Divin ny Hoavy : ny Fandriampahalemana izay nandrandraina elabe : ny Masoandro kely ny
Ny Fanekena Andraikitra dia tsy mety hatao ami’ny endrika roa eo amin’ny Fiainana, Andriamanitra – Fiainana
aranofo raha tsy tanteraka ny Fiombonana akaiky (unité intime) : Ny fananganana ny Fiombonana Hiérarchique
, ny fifandraisana ny Fanahy mahaolona, ny Finoana, ny fahazoana ny asan’ireo Anjely sy Hiérarchie ny Tany
miaraka amin’ny Lalàna ny Energie, manomboka amin’ny Fiombonana am-panahy izay mamelona manomboka ny
vao mangiran-dratsy mampitohy hampitony mandrampahariva ny andro.
Izany no asa isan’andro ny Fanahy mahaolona izay maha-Disciple sy Mpiampinga Kristy manaiky Mandray
andraikitra amin’ny asa mivantana amin’ny zavatra hatao araka ny feon’ny Fiheritreretana ao miny (intuition) :
Tsy misy zavatra hafefenina.Ny fahafainganan’ny Heritreritra ho lasa asa : Baikon’Andriamanitra izay lasa
feon’ny Fanahy mahaolona ho lasa Feon’ny fiheritreretana (intuition).
Ny baiko tsy tanteraka dia fandavana ny fankatoavana.
Ny herin’ny Hery aranofo no manjaka,ny Personnalité sy ny sitrapo no manapaka ny Fanahy mahaolona tsy ho
afaka mandray anjara amin’ny fiainana ny olona.
Ny ady misy dia ady amin’ny saina.Tsy misy antoka ho amin’ny fandresena mora sy eo no eo izany.
Tsy maintsy mandroso ianareo, ianareo dia mandroso eo amin’ny varavarana ny tetikasa araka ny Fahavononana sy
Finoana ao aminareo.
Ny Fahavononako folo avo heny ankehitriny, zato avo heny ny tanjakany noho ny tamin’ny 2009
SL dia manana ny fomba rhetra hafahany milaza izany ankehitriny.
Izany no manova ny fomba famakinana ny hafatra.Ianareo no mandinika ny fozotran’izany.
Ny taona 2009 hatramin’ny 2016 : cycle iray manontolo fampitandremana izay efa nivo atra ho Baiko Cosmique :
baiko ny Kristy, Fotoana ny Fitsarana.
Hivereno ny teny farany tamin’ny teny fampidirana :
« Izay rehetra teny tononina eto dia teny farany.
Fitiavan-tena, tombontsoa, fahafam-po : izany no mivoaka avy ao aminareo, ny aura maloto ao aminareo izay tsy
namaly, nefa ianareo dia mahatantatra.
Ankehitriny dia maro ny Disciple vaovao efa na-dalana, voaterin’ny zavamisy ankehitriny sy ireo manana
Efa eo aminareo ny fiainana ny Energie ao amin’ny asan’i Kristy :
Ny fivoarana ny tanjakan’i Kristy ao anaty ny heritreritra.
Ny fanadiovana ny lalana avy amin’ny famerimberenana isam-bolana ireo tenin’i Kristy ao an-tainan’ny
Ny teniny izay raisintsika, izahay Hiérarchie, arymanamafy ny hafatra vaovao,
Ary ireo asa Lehibe mampiombona ireo Energie lehibe Maitresse ny Plani’Andriamanitra : ny 1 sy ny 2
Eny,ny Fandresena dia any amin’ny subtil aloha, tsy hita ny masonareo.tsy maintsy.
Tsy afaka ny hiaina izany ianareo raha tsy maniry izany « nu devant Dieu » raha tsy manolotra tanteraka ny
tenanao ianao tahaka an’i SL.
Izy no ohatra velona, izy ilay efa nomanin’i Kristy, nanome fanabeazana, nampandalovana sedra sy fitsapana maro.
Izy dia boky velona ny fandresena.
Harao izy.Efa nanoratra sy nandefa hafatra maro ho anareo izy.
Ny Fandriampahalemana dia avy amin’ny Fiombonana
Ny Hery dia avy amin’ny Fanekena Andraikitra
Ny Hafaliana dia avy amin’ny Fanahy mahaolona mifoha sy manana fahafahana
Ny Fandresena dia teraka ao anaty ny « aura du Christ »
SL no hanokatra ny varavarana
Ny Ampinga Fahazavana no manorina ny Fiombonana magnétique
Fiombonana ny heritreritra – Fiombonana amin’ny asa – Fiombonana am-panahy.
Ny fahadiovam-po sy fanasitranana ara-tsaina no antoka.
Hiresaka ny Vehivavy isika sy ny olombelona vaovao
Ao anaty ny korontana ny olombelona, misy tsindry hazolena lehibe mihelimpatrana izay tsy tokony hiseho akory :
ny fitsarana izay miharatsy mahazo ny vehivavy, mitovy sahala amin’ny lehilahy, eo amin’ny Fanahy mahaolona.
Manombatombana ny fampandrosoana ny fiarahamonina eo amin’ny anjara andraikitra ny vehivavy, ary ny lehilahy
dia nanararaotra ny herim-batana mba handraisany ny fahefana ka mametraka ny vehivavy ho ambany noho ny tany,
ary mampiaina ny vehivavy ny fanararaotana ratsy.
Tonga ny fotoana farany hitsaharan’ny fijaliana ny vehivavy ao anaty ny fahaterahan’ny olombelona vaovao ary ny
vehivavy no hanokatra nyvaravarana ho an’ny Civilization vaovao : avy amin’ny fifandraisany amin’ny Energie 2
mandalo amin’ny vatany izay manome aina.
Izy no mpisehatra ny Fiombonana, ny fananganana ny fandriampahalemana, ny fahatongavan’ireo Fanahy
mahaolona izay manao ny Voninahitra ny zanak’olombelona sy ireo Fanabeazana.
Jean-Jacques Andrianaivo pour le Groupe Paysans de Madagascar
Sparta-Forschung des Helmut Berve
herauszulesen, ist ein schwieriges Unterfangen, denn wie es Volker Losemann treffend ausdrückt, läßt es sich im Einzelfall nur schwer abschätzen, „[i]n welchem genauen Verhältnis hier opportunistis...
Andry Rajoelina tao Fascène : « Ballon d`or no entiko aty Nosy Be »
FANOMEZAM- PAHASOVANA: Tena ilaina tokoa eo amin`ny asa
“Mazàna no ataon’ny mpitandrina an-tsirambina ireto sehatr’asa lehibe iretofanavaozana ara-pivavahana, fanomezam-pahasoavana, asa fanaovan-tsoa, miraka amin’ireo sehatr’asa goavana momba ny asa fit...
amin’ny bokim-piangonana. Tsy ireny bokim-piangonana ireny velively no hovelarina amin’ilay andro lehibe hitsaran’Andriamanitra, rehefa hiseho eo anatrehany ny nofo rehetra, mba hitsarany azy araka...
«Novonjena tamin-Kery teo Andalantsaran`ny Helo »
Ao amin'ireto pejy ireto no hizarako aminao ny fiainako taloha mandra-pahatongan'ny fotoana izay nahitako ny fahamarinana sy ny tena antony nahavelomako. Tsy mora ny mamerina ny fahatsiarovana ny l...
Foto-kevitra sy tsangan-kevitra momba ny fahaiza
CB INONA NO FOMBA ATAO MBA HIVELARANA